အို! မြန်မာ!!! – Ohhhh!! Burma!!! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » အို! မြန်မာ!!! – Ohhhh!! Burma!!!
ဂနေ့တော့ Myanmar Legal, Tax & Business Insights Seminar ကို …
အဲဒီ စီမိနာ မစခင် ကော်ဖီသောက်တဲ့ နေရာမှာ ထိုင်ပြီး ကော်ဖီသောက်တုန်းးး အမျိုးသားတစ်ယောက် သူ့ကိုယ်သူ လာမိတ်ဖွဲ့ပါတယ်။
(အဲဒီ အချိန် ကျော် က သူ့ကို One of the Speakers မှန်းမသိသေးပါဘူးးး)
သူကတော့ မြန်မာပြည် အကြောင်း စကားစပ်မိရင်းနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်ရင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် မြန်မာပြည်ကို ဝင်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းး…
ခုချိန်မှာ ဘာဥပဒေမှ မခိုင်မာခင် ဂျင်နရယ်တွေကိုနဲ့ ပိုင်တာနဲ့ ရတာလွယ်ကူမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း …
General Election လား Election for Generals လား မသေချာသေးကြောင်း ဟာသလုပ်ပြီး ပြောပါတယ်။
နောက်မှ အတည်ပြောတာက …
များသောအားဖြင့် မြန်မာပြည်က ဘီးဇီးနစ်လုပ်မယ်ဆို နယ်ခံပါတနာရွေးချယ်တာက အရေးကြီးတယ်တဲ့။
တစ်ချို့က ဘယ် ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ခင်တယ်၊ ဘယ်သူနဲ့ သိတယ်ဆိုတာတွေ များပြီး တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့၊ အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေ ရှားသတဲ့။
သိတဲ့တိုင်း မြန်မာပြည်မှာကလည်း ဗိုလ်ချုပ်တွေ အရမ်းပေါတယ် ဆိုကြောင်း မြန်မာပြည် အကြောင်း ကော်ဖီနဲ့ မြည်းသွားပါသေးရဲ့။
၁) ရှေ့နေ ပြောတဲ့ အကြောင်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းပေါ့လေ။
မြန်မာပြည်မှာ လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တယ် ဆိုရင် သိသင့်တာတွေ အကြမ်းဖျင်း ပြောပြသွားတာပေါ့။
တော်တော်များများက မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တာတွေ ရှိပေမဲ့လည်းး တစ်ချို့ အချက်တွေက လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ စဉ်းစားကြတဲ့ အချက်တွေ ရှိပါသေးသတဲ့။
– ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှု
– လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ ဘတ်ဂျက်ကို တွက်ရာမှာ မမှန်းဆနိုင်မှု
– အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာကို ဆွဲဆောင်အား အနည်းဆုံးဖြစ်မှု
– အသစ်အသစ်သော ဥပဒေတွေ ပြဌန်းဖို့ ကြိုးစားမှု
– လျှပ်စစ်စတဲ့ Facilities တွေ မပြည့်စုံမှု
– ရှိတဲ့ ဥပဒေ မခိုင်မာမှု
– ခိုင်မာပြီး ရပ်တည်ဖို့ မသေချာတဲ့ အခြေခံ စီးပွါးရေး အချက်အလက်တွေ နဲ့
– အရည်အချင်းပြည့်တဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ လူ အရင်းအမြစ်မရှိမှု တွေပါတဲ့။
(ကြားရတာ ရင်နာစရာပဲ အဘတို့ရယ်)
အဲဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာများ လုပ်ငန်းစချင်တယ် ဆိုရင် ကြိုတင် တွေးဆရမှာတွေ ရှိပါတယ်တဲ့။
– ကိုယ် ဘယ်လို လုပ်ငန်းမျိုး လုပ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်..
– Foreign Invesment Law (FIL) မှာ Register လုပ်မှာလား ဆိုတာ ကို စဉ်းစားပါတဲ့။ အဲဒါဆိုရင်တော့ Myanmar Investment Commission (MIC) က ပါမစ်လျှောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပုံမှန် အတိုင်းလျှောက်ရင် ပျမ်းမျှ ၃ လ ကြာပါသတဲ့။ (ပုံမမှန်ရင်ရောလို့ မမေးရဲလို့ မမေးတော့ပါဘူးး)
– လိုအပ်တဲ့ အချိန်နဲ့ လိုအပ်မဲ့ ပိုက်ဆံကို တွက်ဖို့ လိုသလို (အဲဒီ တွက်ဆထားမှုတွေထက် အများကြီး ကြန့်ကြာ၊ ကုန်ကျမှာကိုလည်း တွေးထားပါ တဲ့။)
– ဒေသခံ ပါတနာ ရှာနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်တဲ့… ပြီးတော့ ကော်ဖီဝိုင်းမှာ ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဆက်ပြောပါတယ်။
– အဲ!! သက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရာတွေကို အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ဖို့လည်း ရင်းနှီးငွေ ဆောင်ထားပါတဲ့။
၂) နောက် တစ်ယောက် ပြော အလှည့်မှာတော့ မြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ဥပဒေ အကြောင်းကို နည်းနည်းပါးပါး ပြောပြသွားပါတယ်။
တရားဝင် ဥပဒေ/စံနစ်ကို အကြမ်းဖျဉ်းကြည့်ရင် ထင်ရှားတဲ့ ဥပဒေတွေက…
– ၂၀၀၈ က ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ဥပဒေ
(ဒီနေရာမှာ ရှေ့နေကပြောတာက ဒီ ဥပဒေက လေဒီကို သမဒ မဖြစ်ရေးဦးတည်ပြီး ဆွဲထားတာမို့ မြေပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေ အတွက် အရေးမပါပါဘူးတဲ့။ သေဗျဇိ)
– ၂၀၁၂ မှာ ထုတ်တဲ့ Foreign Investment Law (FIL)
– ဟိုးအရင် NY Convention မှာ ပါကတည်းက ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားနဲ့ဖြစ်တဲ့ အမှုအခင်းဆိုင်ရာ တည်ဆဲ ဥပဒေ
– အခု ပါလီမန်မှာ ဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်တဲ့ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ဥပဒေတွေ
(ဦးပိုင်ဘက်ကို အရေးပေးပြီး အတည်ပြုမယ်လို့ ကောက်ချက်ချကြပါတယ်၊ ဂစ်)
– FIL ကိုပဲ လူပြောများလို့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေဆဲ ဥပဒေကြမ်း အဆင့် ၃ ရှိပါသေးသတဲ့။ ။
မြေယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ တခြားနိုင်ငံသားတွေ အတွက် ရှုပ်ထွေးဆဲ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ မြေ အမျိုးအစားတွေ ရှိနေဆဲပါတယ်။
– ဖရီးဟိုး မြေ
စတာတွေရှိတာမို့ မြေယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ချင်ရင် အဲဒီမြေရဲ့ နောက်ကြောင်းကို သေချာစုံစမ်းသင့်ပါတယ်။
၂၀၁၄ မှာ Special Economic Zone Law (SEZ) ထွက်ပေါ်လာပေမဲ့ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေတွေက Processing ကြာလေ ပြောင်းလဲလာလေမို့ စိတ်ချလုံခြုံမှုမရှိပါဘူးတဲ့။
အဲဒီ ရှေ့နေက ဥပမာနဲ့တောင်ပြောသွားသေးတယ်။
အစိုးရက သိမ်းပြီး ကိုယ့်ကို ရောင်းတာ၊ မြှုပ်နှံခွင့်ပေးတာမှန်ပေမဲ့ မတရားသိမ်းထားတဲ့ မြေဆိုရင် အရင် ပိုင်ရှင်မကျေနပ်တာနဲ့ ကိုယ့် လုပ်ငန်းမှာ အနောက်အရှက်ရှိနိုင်တာမို့ အားမပေးချင်ပါဘူးတဲ့။
၃) အဲလာနဲ့ နောက်တစ်ယောက်ကပြောတော့ လူ့အရင်းအမြစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေ အကြောင်း ရောက်သွားရော။
သက်ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေ ပြောပြပါတယ်။
အဲ။ ဒီ ၂ ခု ရဲ့ ပြသနာက ဘယ်ကွန်ထရက်က Active and Relevant ဖြစ်မှန်းမသိပါဘူးတဲ့။
ဆိုတော့ … တရား ဥပဒေမရှိဘူးထင်တဲ့ ကျော်တို့ ဆီမယ် ဥပဒေတွေ အများကြီးပါလားး။
နောက်တော့ အလုပ်ခန့်ပြီဆိုတာနဲ့ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားကြား ချုပ်ဆိုတဲ့ စာချုပ်မှာ ပါဝင်သင့်တဲ့ အချက်တွေကို နိုင်ငံတကာ သုံးတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ညှိပြီး ပြောပါတယ်။
(အဲဒီ အကျယ်ကို ကျနော် သတ်သတ်ရေးပေးပါ့မယ်)
၄) ဒီ တစ်ယောက်ကတော့ အခွန် အကြောင်း ပြောပါတယ်။။
အခွန်အမျိုးအစားနဲ့ ကောက်ခံပုံကောက်ခံနည်းတော့ အကျယ် ပြောရမှာမို့ ကျနော် ကျော်ခဲ့ပါ့မယ်။
အဓိက ပြောချင်တာက …..
ဘယ်နိုင်ငံသားမဆို မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်လုပ်လို့ ရတဲ့ ပိုက်ဆံဟာ မြန်မာအစိုးရကို အခွန်ဆောင်ရပါတယ်တဲ့။
ခက်တာက အခွန်ကောက်ခံဖို့ ဝန်ထမ်း၊ မှတ်တမ်း၊ စစ်ဆေးမှု လုံလောက်အောင် မြန်မာပြည်မှာ မရှိပါတဲ့ ခင်ဗျားးး!!!!!
ဆိုတော့ အခွန်ရှောင်နေတဲ့ ရှောင်နေနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းဟာ အများကြီးမို့ တိုင်းပြည်အတွက် နစ်နာပါသတဲ့။
အရက်၊ ဘီယာ၊ ကွမ်းယာ လုပ်ငန်းတွေက အခွန်မဆောင်မဖြစ်ဆောင်ရမဲ့ လုပ်ငန်းတွေပါတဲ့။
တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေ ရဲ့ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း အခွန် ဟာလည်း မြန်မာပြည်မှာပဲ တွေ့နိုင်ပြီး
အဲဒီ ဆောင်တဲ့ အခွန်တွေ အပေါ် အသုံးချမှုကလည်း
အစိုးရကို ယုံကြည်စွာ အခွန်ဆောင်ရမဲ့ အခြေအနေကို ထိခိုက်တာမို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမဲ့ထဲ အခွန်ကိစ္စလည်း ပါပါသတဲ့။
၅) နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ အမှုအခင်းဖြစ်ခဲ့ရင် သိရတဲ့ ဥပဒေတွေ အကြောင်း အကြမ်းဖျင်းပြောတာပါ။
ခံစားရချက် အဆိုးဆုံးပါပဲ ပရိတ်သတ်ကြီးးး
မနှစ်က ကျနော် ရင်ဆိုင်ရတဲ့ Arbitration အမှုမျိုး အကြောင်းကို ပြောတာပါ။
ပြောတဲ့သူက လန်ဒန်က ဥပဒေဘွဲ့ရထားပြီး မြန်မာပြည်ကို ဥပဒေကိစ္စနဲ့ သွားလိုက်ပြန်လိုက်လုပ်နေတာ အနှစ် ၂ဝ ရှိပါပြီ။
Arbitration အတွက် သုံးနေတဲ့ ဥပဒေက ၁၉၄၄ တုန်းက အင်္ဂလိပ်ဥပဒေပါတဲ့။
အဲဒီထဲက မပါတဲ့ အချက်တွေဆို အင်ဒီးယား ဥပဒေထဲက ယူသတဲ့။
မြန်မာပြည်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့လို့ မကျေနပ်တာများရှိခဲ့ရင် ဥပဒေတို့ ရှေ့နေတို့ တရားသူကြီးတို့ ဆိုတာ မေ့ထားလိုက်ပါတဲ့။
ညစာ စားရင်း ရှင်းလို့ ရပါသတဲ့။
ကျော်တို့ ဆီက ရှေ့နေနဲ့ တရားသူကြီးတွေဟာ ဒီလို အမှုအခင်းမျိုး အတွက် လေ့ကျင်သင်ကြားထားခြင်းမရှိပဲ ရာဇဝတ်မှုတွေ အတွက်ပဲ အလုပ်ရှုပ်ကြပါတယ်တဲ့။
ဒါတောင် မြန်မာပြည်မှာ လူ့ အသက်တန်ဖိုးမရှိဆုံးပါတဲ့။ ပိုက်ဆံနဲ့ တွက်ပြပါတယ်။
ကျနော် စိတ်နာလို့ မပြောပါရစေနဲ့။
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အမှုအခင်းကို ငွေနဲ့ ဖြေရှင်းပုံကို သနားသလို ပြောသွားတာပါ။
တရားခွင်မှာ သက်သေဝယ်လို့ရသလို အချိန်ကို ကြိုက်သလောက် ဆွဲလို့ရတာမို့ တတ်နိုင်ရင် မြန်မာပြည်မှာ အမှုမဖြစ်ဖို့ တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။
နောက်ဆုံး တစ်ခုက အကျင့်ပျက် ခြစားမှု တွေ အများဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး
ထိရောက်တဲ့ အရေးယူမှု မရှိတာမို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ အဲဒီ Corruption ကို အားပေးလို့လည်းမကောင်းး၊
မပေးလို့လည်း ရှေ့မရောက်တာမို့ သတိထားဖို့ ပြောသွားပါတယ်။
စားရသောက်ရတာနဲ့ မတန်အောင် ရလာခဲ့တဲ့ အသိအမြင်တွေပေါ့လေ။
ဒါတွေကို မင်းသားကြီးကို ဘယ်မျက်နှာနဲ့ ပြန်ပြောရမတုန်း စဉ်းစားတုန်းပဲ။
နိုင်ငံတကာလေးစားရတဲ့ သူ တစ်ယောက်လုံးကို မဲပေးဖို့ ကျော်တို့ ဘာကြောင့် တုံ့နှေးနေရမလဲနော်။
သူများ အပြောအဆိုတွေ မခံချင်တော့ဘူးးး
စေတနာရှိသလိုလိုနဲ့ နှိမ်တဲ့ မျက်လုံးတွေ စကားလုံးတွေကိုလည်း မုန်းလာပြီ။
အချီကြီး ပါလား ချစ်သောဇီ။
. ထုံးစံအတိုင်း။ အကြွေးသာ မှတ်ပေတော့။
ထိပ်တက်ပြီး အကြွေးခံ နေရတာ တော့ စောဒီး။ ညစာချက်ချိန်။ :-((( lol:-)))))
မြန်မာပြည်ကြီးမယ် ဥပဒေ အထက်က အဘ နဲ့ ငွေ ရှိတယ်
ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီး ကို မဲမပေးရဘို့အရေး ဘယ်လိုဘဲ လုပ်ရလုပ်ရ
နည်းမျိုးစုံ နဲ့ အပုတ်ချ တိုက်ခိုက်တယ်
သူတိုသာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့ ဟိုအစိတ်သား အသိုင်းအဝိုင်းကဆို
ဒေါ်စု ဆိုတာနဲ့ တီကောင် ဆားနဲ့တို့သလို ထွန့်ထွန့်လူး
ဒီကြားထဲ ကတော်တချို့ တွေက ပိုဆိုး သူတို့လုပ်မှ လူတွေက ပိုကြည့်မရ
သူငယ်ချင်း ကတော်တွေက တော့ ပါးပါးနပ်နပ် ဘဲ အသံမထွက်ဘူး
အပြောင်းးအလဲမှာ အစိတ်သားး ဇွတ်ထည့်ထားးမယ့် ကိစ္စ လည်းး
ကော်ဖီဝိုင်းးမှာ အလွတ်သဘော ဟားးသွားးတယ် ဒေါ်လေးးရေ…
အရမ်းး လည်တဲ့ သူတွေ…
သူတို့ ပြောတာ မကောင်းးလို့ ပြောတာ ဆိုပေမယ့်လည်းးး
မြန်မာတွေ ဖြစ်နေတော့ ကိုယ်ပဲ ရှက်ရတယ်…
အာဆီယံ နိုင်ငံတွေ က အချဉ်လို့ သဘောထားးပြီး ဂျင်းးထည့်ဖို့ ကြိုးးစားးနေကြတာ
UMFCCI က.. ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်ရဲ့အင်တာဗျူး.. အခုတင်ပေးမယ်..။
ဗမာတွေ..အစိုးရလုပ်နေသူတွေ.. ကမ္ဘာပတ်အလုပ်လုပ်နေသူတွေကို.. အချဉ်လို့သဘောထားကြတာတော့ အံ့ဩစရာပါ..။
လာလုပ်တယ်ဆိုကထဲက… တခုခု.. တခုခုတော့ရှိမှာပဲလို့.. တွေးသင့်သပေါ့…နော..။
.အော် အဘတို့ရယ်. . . .
စိတ်ထဲက အဲလိုပဲ ရေရွတ်ပြီးး
ပြင်ရမယ့် ဌာန ၃ ခု ရှိတယ် လို့ မြင်သတဲ့..
ကျန်းမာရေးတော့ ကိုယ့်ဆီကိုယ်ပြန်ပြီး ကုကြလို့ ပြောမလားဘဲ။
ဘယ်နေရာမဆို cash basic ဖြစ်နေတာလည်းး
စီးးပွားးရေးးမှာ နောက်ကျ သတဲ့…
ကျနော် က အဲဒီ အပိုင်းးတွေ ဝေးးတယ် အရီးးရေ..
အတော် အားးးစိုက် နားးစိုက်ခဲ့ရတယ်…
ပြည်တွင်းး ဗဟိုဘဏ်က isolated ဖြစ်နေကြောင်းး လည်းး ပါတယ်..
. မြန်မာပြည်မှာ အိမ်ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံတွေ ဆာလာအိတ်ကြီး နဲ့ ထည့်ပေးတာ မြင်ဖူးကြလားမသိ။
။ ဘဏ် တွေ ကလဲ လူတစ်ယောက်ထဲ က ဒေါ်လာပေးပြီး ကိုယ့်စာရင်းထဲ ကို ကျပ်ငွေ သွင်းတာ တစ်ခါထဲ ကောင်တာ တစ်ခုမှာ မပြီးဘူး။
က ကောင်တာ တစ်ခုက ဒေါ်လာ ကို လဲ ပေးလိုက် တဲ့ ငွေ တွေ ကို ယူ နောက် ကောင်တာ တစ်ခု မှတ် ကျပ်ငွေ နဲ့ သွင်းရတာ။
တစ်ဘဏ်ထဲ မှာ ဘဲ လူတစ်ယောက်ထဲ စာရင်းနော်။
ဘဏ် ဘဏ်ချင်း မဟုတ်သေးဘူး။
စုတ်ပြတ်သတ် နေတဲ့ ဘဏ်စနစ် နိုင်ငံတကာ တန်းဝင်အောင် သုံးစားမရသေး။
အဝေးကြီး မှ အဝေးကြီး။ အားလုံး က ဟန်ပြလေး လုပ်ထားတာမို့ တကယ် နိုင်ငံခြားသား တွေ ဝင်လာရင် ပြသနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် နဲ့ တွေ့မှာ။ မပူ နဲ့။
ငွေ ပေးး ငွေ ယူ ငွေ လွှဲ ခက်ခဲ တာ တစ်ကြောင်းးးးး တဲ့…
အဲဒီ Seminar က ဘယ်သူတွေ က ဦးစီး လုပ်ပေးတာလဲ။
လူတိုင်း ဝင်နားထောင်လို့ ရတယ်လား။
အဓိက Taxation အကြောင်း ကို။
သူတို့ ဟာက Seminar ထက် သူရို့ လူတွေ ကို ရှောင်ရန် အတွက် သတိပေးစကား လိုလို ၊ အလုပ်လုပ်ဖို့ ချော အောင် ဆောင်ရန် Hint ပေးသလိုလို။
. မြန်မာပြည်ထဲ ဒီရက်မှာ လောလောဆယ် ဖြစ်နေတဲ့ Yangon Stock Exchange ဖွင့်တော့မှာ ကို ရော မဝေဖန်ဘူးလား။
Ethics မရှိတဲ့ နိုင်ငံ မှာ ဒီ လုပ်ငန်းလုပ်ရင်တော့ သတင်းတွေ က ဟင်းလင်းပွင့်ထွက်ပြီး ကမ္ဘာ့ ဈေးကွက်တောင် ပျက်သွားပါဦးမယ်။
ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြား စီးပွါးရေးသမားတိုင်းကတော့ ၂၀၁၅ အလွန် အတွက် အကွက်ရွှေ့ပုံကို နှစ်မျိုး ပြင်ထားပြီး ဖြစ်မှာပါ။
ဘယ်သူဘဲ အစိုးရဖြစ်ဖြစ် ရောနိုင်မဲ့ သူချည်းဖြစ်မှာပါ။
တကယ် နစ် သွားမှာက ပြည်သူလူထုဘဲ။
ဒါကိုမှ ကိုယ့် အတွက်ကို မကာကွယ် နိုင်ကြ ရင်လဲ ခံ ပေါ့။
ကိုယ့်လက်ထဲ က မဲ တစ်ပြား နဲ့ တစ်ယောက်ချင်း ကိုယ့်တာဝန်ကျေမှ ပြည်သူအတွက် တကယ်အလုပ်လုပ်ပေးမဲ့ အစိုးရ ကိုရမှာ။
မဟုတ်ရင်တော့ ပွဲစားဗိုလ်ချုပ်များ အတွက် ပွဲခ တွေ နင့်ကနဲ ထပ်ရ ဦးမဲ့ လမ်း ဘဲ ဆိုက်မယ်။
အဲဒီနောက် လူတန်းစား ကွာဟမှုတွေများ ပြီး ဆင်းရဲသား တွေ ဓားမြ သူခိုး ဖြစ်ကိန်းဘဲ။
Yangon stock exchange အကြောင်းး ပါးးပါးးလေးးပါတယ်…
လာရောက်ရင်နှီးးမြှုပ်နှံချင်တဲ့ အကြောင်းးတွေထဲ က တစ်ခုပါတဲ့..
စလုံးးက Law Firm အကြီးးဆုံးး ၅ ခုကရှေ့နေတွေ ပြောကြတယ်..
၉နာရီ ကနေ ၅ နာရီထိ…
ကမ်ပနီ တွေ ကို အီးးမေးးလ် ရောက်တာ..
မင်းးသားးဂျီးး က အောက် စတေးးရှင်မို့
သများးနဲ့ ချာတိတ် သွားးရတယ်…
တစ်ယောက်ကို ဒေါ်လှ ၆၀ဝ ပေးးရတယ်..
ဟိုတယ်မှာ all drink/food provided.
မင်းးသားးဂျီးးက သများးတို့ဆီမှာ ဈေးးကွက်ချဲ့ချင်နေတယ်…
အလုပ်ရခဲ့ရင် ချာတိတ်ကို မြန်မာပြည်မှာ ထားးမယ်..
သိသင့်တယ် လို့ ယူဆလို့ လွှတ်တာနေမယ်..
အယောက် ၃ဝ ပဲ ရှိတယ်..
Magnuslink နဲ့ Eurocham အဖွဲ့ ၂ ခု က organize လုပ်တာ…
သူတို့ က အစိုးးရ အပြောင်းးအလဲကိုတွေးးပြီးးသားးး
ဒါပေမယ့် တချို့ စလုံးးတွေ က မပြောင်းးလဲခင် ဝင်ချင်တယ် ဝင်လာနေတယ်. ဝင်ပြီးးကြပြီ…
ဥပေဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးး တွေ့ ရတဲ့ အခက်အခဲ. တွေ့နိုင်တဲ့ အခက်အခဲတွေ ကို စုပြီးးပြောကြပုံရတယ်…
အလုပ်သမားး ဥပဒေ ပြောတဲ့ရှေ့နေက မြန်မာပြည် ရုံးးခွဲမှာထိုင်တာ…
Arbitration ရှေ့နေက မြန်မာပြည်မှာ အနှစ် ၂ဝ
ပထမဆုံးး ရှေ့နေကတော့ ရန်ကုန်က စားးသောက်တိုင်တော်တော်များးများးကောင်းးတယ် မကောင်းးဘူးး သိရဲ့..
. ဒေါ်လာ ၆၀ဝ ဆိုတာ နည်းတော့မနည်းဘူး။
ဒါပေမဲ့ သိန်းသန်းချီ ရင်း ရမှာနဲ့ ယှဉ်ရင် ဘာမှ မဖြစ်လောက်တော့ ဒီလို သတင်းတွေ ရတာ တန်မှာပါ။
တစ်ချို့ က International school ဖွင့်ချင်တဲ့ သူတွေ လည်းးပါတယ် အရီးးး
အခုခေတ်ဗမာ့နိုင်ငံရေးမှာ.. ဒေါ်စုကိုအာဏာရစေချင်ရင်.. အဝါဂိုဏ်းကိုစည်းရုံးနိုင်မှဖြစ်မယ်…။
အဘတွေကို ဆက်သွယ်ရာမှာ.. အဝါဂိုဏ်းသားကြီးတွေသာ.. လောဘီ.. ပွဲစားတွေဖြစ်နေတာမို့ပါ..။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုကြည့်ပြီးမှသာ… ရင်းနှီးမြုတ်နှံသူတွေ… “စ”စဉ်းစားသင့်တယ်လို့… အကြံပေးချင်တာပါပဲ…။
ဥပဒေ ပညာရှင်တွေက ဟိုးးအရင်က လောတွေ ကိုပဲ refer လုပ်နေကြတုန်းးပဲတဲ့…
အခုချိန်နဲ့ update ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ စိတ်မဝင်စားးကြဘူးးတဲ့..
ဘုန်းးကြီးးတွေ က ဥပဒေ ထုတ်ထားးတာ ပြောပြလိုက်ရင် အဲဒီ ရှေ့နေ မျက်နှာကြီးးး
ဘယ်လို ဖြစ်သွားးမလဲ သိချင်လိုက်တာလေ..
အဲလို ထုတ်တာလဲ သူ့ကိုအမိန့်ပေးသူ ရှိလို့ ပါ ဇီကလေးရာ။
ဟိုက ပါးစပ်ပိတ်ခိုင်းချိန် ဘာသံမှ မထွက်တာ ကြည့်ပါလား။
ခင်ဗျား အချိန် ဝင်တော့ ဆိုမှ ဝင်ဝင်လာပြီး အသံပေးရတာ။
အဓိ က က အစိတ်သားး နဲ့ ၂၀၀၈ ဥပဒေ မှန်းး
သူတို့ သိပါတယ် အရီးးးရေ…
တဂျီးး လည်းး သိမှာပါ…
လူကနေပေမယ့် လက်ကမနေလို့ ဝင်ဝင်ပြောနေတာနမှာာာ
ဟုတ်သေးပါဘူး။ သူကြီး ဟာက။
အဝါရောင် ကို ဘဲ့နဲ့ ဖြစ်လို့ အတင်းဆွဲသွင်းနေပြန်သတုံး။
အစိမ်းရောင် တွေ က ထိပ်တက်နေတာ မြင်ရက်နဲ့။
မဟုတ်ရင် ဒီ စင်ကာပူရီယန် လေ့လာသူများ က မြန်မာပြည်က ပေါင်းရ ဖားရမဲ့ စာရင်းထဲ အဝါရောင် တွေလဲပါကြောင်း ပြောသွားမှာပေါ့။
သူတို့က ကိုယ့်ထက်တောင် မြင်သေးဟာကို။
တရားး ဥပဒေ နဲ့ စီရင်ရေးး အမြင်တွေမှာ
အဝါရောင်ကို ထည့်သွင်းး စဉ်းးစားး စရာ မလိုဘူးး လို့ ထင်လားးမသိ…
အတိုက်အခံ မကောင်းလို့ ဖြစ်ရတာ ..
အတိုက်အခံ ရှိမှ တိုးတက်မည် ဆိုတယ်မဟုတ်လား..
အားကိုးဗါဒယ်ဆိုမှ … ဇာတ်မင်းသားလေသံနဲ့…
အော်…. ရင်ဘတ်နှစ်ခြမ်း ဗြန်းဗြန်းကွဲအောင် ကချင်ပါသော်လည်း….. ကျန်းမာရေးကမကောင်း….
အစိမ်းဂိုဏ်း ကို မလှန်နိုင် အဝါဂိုဏ်းကိုလည်း ကြောက်ရတဲ့ အတိုက်အခံ…
သဗိတ်မှောက်ဂျဗျာ … (ရေမခြောက်မှာ စိုးလို့ပါ … ဟိဟိ)
အကျင့်ယုတ် အဆိုးးရ မှာသာ တာဝန် အရှိဆုံးး
ကျန်းးးး… ကျုပ်တို့ ကို လုပ်ချင်တိုင်းကို လုပ်နေတာ…
တခါကလေးမှ ပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက် မဆန့်ကျင်နိုင်တာမျိုးကျ …
ဇာတ်လိုက် မခေါ်ဝူး ခည…
လက်ရေးနဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကို ပါ့စ်ပို့ (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှာ) လက်ရေးနဲ့ထည့်ပေးတဲ့ခေတ်ကတည်းက ကျနော် မြန်မာနိုင်ငံအပြင်ဘက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူဘဲ လက်ရေးတွေနဲ့မို့ ကိုယ့်ပါ့စ်ပို့စ်စာအုပ်ကို အသေအချာစစ်ဆေးစိုက်ကြည့်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တာဝန်ခံတွေများစွာတွေ့ခဲ့ရဖူးတယ်။ သူတို့အလုပ်သူတို့ လုပ်ပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို တန်ခိုးဩဇာကြီးမားတဲ့ လက်မှတ်တစ်ခု ဖြစ်စေချင်ခဲ့တာ အရမ်းပဲ။
နိုင်ငံရေးခေတ်ကာလ အပြောင်းအလဲတွေ ကို ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြိး မကြာခင် ရွေးကောက်ပွဲတွေလာတော့မယ်။ ကျနော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကိုအားပေးတယ်။ NLD အနေနဲ့ ပြည်သူတွေကို ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ရိုးရိုးသားသား ယုံကြည်လု့ိပါ။ တချိန်ချိန်မှာ ကျနော်တို့ ပါ့စ်ပို့တွေဟာ လူလူသူသူ လေးစားခံရတဲ့ အနေအထားတစ်ရပ်ကိုလဲ လိုချင်တယ်လေ။
အခု ကျနော် အားပေးထောက်ခံတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေရဲ့ အရည်အချင်းကို သံသယရှိကြတာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ကျနော်လဲ သံသယရှိတာပါပဲ။ သူတို့ လုပ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာပေါ့။
အဲ့ဒီမှာ စိတ်ဝင်စားစရာအချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဘယ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံမှာမှ အကုန်လုံး အဆင်သင့် ကျွမ်းကျင်ပြည့်စုံနေတဲ့ တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့က မိုးပေါ်က ကျလာသလို လာပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်သွားပေးတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အကုန်လုံး လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းကြိုးစားသင်ယူရင်းတည်ဆောက်သွားကြရတာပါပဲ။
အခု ဒီနေ့ လူအများကိုးကားကြတဲ့ စင်ကာပူ။ မလေးရှားက ကမခွဲထွက်ခင် အင်ဒိုကနေ စင်ကာပူမှာ ဗုံးခွဲခြိမ်းခြောက်တယ်။ 1965 မတ်လမှာ။ 1965 ဩဂုတ်လမှာ မလေးရှားကနေ ကန်ထုတ်ခံရတယ်။ ဥပဒေပညာနဲ့ကိန်းဘရစ်ချ်ကနေ ဘွဲ့ရခဲ့တဲ့ လီကွမ်ယူနဲ့သူ့ပါတီဟာ အုပ်ချုပ်ရေးအတတ်ပညာတွေ နိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေကို မုဆိုးစိုင်သင် သင်ယူခဲ့ရတာပါ။ အမျိုးမျိုးသော ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်ပြီး သင်ယူခဲ့ရတဲ့ လီကွမ်ယူတို့ အစိုးရအဖွဲ့ဟာ စင်ကာပူကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
NLD ရော အဲ့လို မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လီကွမ်ယူထက် နိုင်ငံရေးဒဿနမှာ ကြေညက်တဲ့သူဖြစ်တယ်လေ။ ကုလသမ္မဂ္ဂမှာ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်လေ့လာခွင့်ရခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်မဟုတ်လား။ သူမကို လုံးဝ ဥဿုံ မယုံကြည်နိုင်သေးရင်တောင် လီကွမ်ယူရဲ့ ပါတီတည်ထောင်ခါစ အချိန်ထက်တော့ ဒေါ်စုဟာ အဆင့်မနိမ့်တာသေချာပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်ခွင့်လေးတစ်ခုတော့လိုပါလိမ့်မယ်။
“မိဘပြည်သူများခင်ဗျာ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သမ္မတဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်းမှာ စသုံးလိုက်တော့ ဆောင်းပါးတွေ တခုတ်တရရေးပြီး ချီးကျူးခဲ့ကြရတယ်။ ပြည်သူကို ဒီလိုခေါ်တာ ကျနော်တို့ မကြားခဲ့ကြဖူးဘူးမဟုတ်လား။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ဒီလို အာလုတ်စကားထက် သူပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာစကားရှိတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အဖိုးတန်ရတနာတွေဆိုတာဟာ ပြည်သူတွေပဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပါ။ ကျနော့်အတွက်ကတော့ သူ့ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလေးစားတာသက်သက်မျိုးထက် သူ့ဒဿနအပေါ် ပိုပြီးဆွဲဆောင်စေတဲ့ စကားပါပဲ။ ပြည်သူကို တိုင်းပြည်ရဲ့ ရတနာတွေလို့မြင်တဲ့ အမြင်မျိုးလေ။
တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ အခက်အခဲတွေက အများကြီးပဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ လက်နက်ကိုင်တွေက NLD ကို လေးစားတာမဟုတ်ဘူး..စတဲ့မေးခွန်းတွေက အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒီလို မေးခွန်းတွေ အခက်အခဲတွေဆိုတာ ပါးစပ်နဲ့ဖြေရမယ့်ဟာတွေထက် အလုပ်နဲ့ဖြေရမယ့် ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ အခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့ အောင်မြင်မှုဆိုတာ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံအောင်မြင်ဖို့လိုတယ်လေ။ အခက်အခဲတွေကို ဖြတ်သန်းရမှာပေါ့။
ဆန္ဒရှိရင် နည်းလမ်းရှိတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တိုင်းပြည်ထဲက အခက်အခဲတွေကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖြေရှင်းသွားကြမယ်။ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းနဲ့ ပြေလည်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ဆက်သွားကြမယ်။ တပ်ထဲက လူတွေပြောလေ့ရှိတယ်။ NLD ကလူတွေက တပ်ကိုမုန်းနေတော့ တပ်ထဲက လူတွေ စိုးရိမ်တယ်ပေါ့။ အညှဉ်းဆဲခံထားခဲ့ရတဲ့လူတွေ မုန်းတာသဘာဝမဟုတ်လား။ နှစ်ဖက်သော အမုန်းတွေကို ဖြတ်ကျော်ဖို့အတွက် ကြိုးစားကြရမှာပါ။ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ သဘောထားကြီးတာ၊ ခွင့်လွှတ်တတ်တာ၊ မေတ္တာစိတ်ထားတတ်တာ ဆိုတာတွေနဲ့ပြည့်စုံရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခဏခဏ ပြောလေ့ရှိတယ်။ လက်စားချေမှာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ မေတ္တာတရားနဲ့ ဖြတ်ကျော်မှ သန်းငါးဆယ်ကျော်သောပြည်သူတွေ အနိုင်ရမှာပါ။
အခုလောလောဆယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြိုင်ဘက်အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီး မုန်းနေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အာဏာရသွားရင် လက်ရှိအနေအထားလေးပျက်သွားမှာစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ မုန်းနေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်။
မုန်းလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့အပါအဝင် အားလုံးအတွက် ကျွန်တော်တ်ို့ကို အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုပါ ဆိုတဲ့ စကားကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်တွေထဲက တစ်စိတ် တစ်ဒေသအနေနဲ့ ပိုပြီး နားလည်လွယ်အောင်ပြောပြပါရစေ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချစ်တဲ့သူရော၊မုန်းတဲ့သူတွေ၊ ယုံကြည်အားကိုးတဲ့သူတွေ၊ သံသယရှိတဲ့သူတွေ အားလုံးပေါင်းစပ်ပါဝင်နေတဲ့ သန်းငါးဆယ်ကျော်ကို ဒီတစ်ခါရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီသန်းငါးဆယ်ကျော်အားလုံးကိုပဲ အနိုင်ရစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုသဘောပေါက်ကြမှာပါ။
မကြီးရေ တွေးကြည့်ရင် အားကိုးစရာဆိုလို့ တစ်ယောက်တည်း ရှိတော့တာလား။ ကျနော်တို့တွေ ရေစုန်မျောတော့မှာလား။ ဥပဒေအထက်မှာ ငွေရှိတယ်ဆိုတာတော့သိပါတယ်။ ဖတ်ရင်း သက်ပြင်းတွေချမိတယ်။
နာ တော့ ရေစုန်မြောမှာ အကြောက်ဆုံးပဲ။
အဘတို့လည်း ယူချင်သလောက် ယူပြီးပြီပဲနော်။
ကျန်သလောက်လေးနဲ့ နိုင်ငံတကာကို အမှီလိုက်ဖို့ ကြိုးစားခွင့်လေးတော့ ပေးသင့်ပါတယ်။
ကဘာ့ မြေပုံမှာမြန်မာလို့ ပျောက်တော့မယ်။
ညှင်း ညှင်း မြန်တျန့်မှာ စီးပွါးရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ Pandora Box ကို ဖွင့်ရသလိုပဲ…
အစိမ်းဝတ်တွေကြီးစိုးတဲ့ ခေတ်ဦးမှာ ဒိုင်စားသွားတာတော့ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတွေပါ ။ သူတို့မှာ Ethic လည်းမရှိ ၊ သူတို့လည်း ဒီအခြေအနေမျိုးကို ကျော်ဖြတ်လာတာဆိုတော့ အစိမ်းဝတ်တွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အမြတ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိပါတယ် ။ တဘက်ကလက်နက်စက်ရုံ တည်ပေးပြီး တဘက်မှာ Daewoo တို့ ဘယ်လိုရိုက်သွားတယ်ဆိုတာ မျက်စေ့လျှမ်းကြမယ်ထင်ပါတယ် ။ အဆီအနှစ်ထုတ်သွားတာမှ ကမ်းလွန်က သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွင်းတွေရော ၊ အချက်အချာနေရာတွေမှာပါ စက်ရုံဆောက် အမြတ်တွေ သဲ့သွားတာပါ ။ နောက်ဆုံး ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ခရိုပန်းရောင်လေးတွေကတောင် ကားစုတ်တွေသွင်း ၊ အထည်ချုပ်တွေလုပ် ၊ နောက်ဆုံး အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအထိ ဝင်ပါပြီး မလည်ရှုပ်လုပ် ၊ ဘတ်သွားတာ အများကြီးပါ ။ မခိုင်မာတဲ့ ဥပဒေကို လက်တလုံးခြားလုပ်သွားတာ သူတို့က အတော်ဆြာကျပါတယ် ။
ပေါက်ဖော်ကြီးအကြောင်းကတော့ တစ်ထောင့်တစ်ညထက် ရှည်မှာမို့ မပြောတော့ပါဘူး ။ သူတို့ကတော့ ခိုးလည်းခိုးတယ် သူခိုးဈေးနဲ့လည်းဝယ်တယ် ၊ ဓားပြကို လုပ်သေနတ်ပါရောင်းသေးတယ်ဆိုတော့ အဘကြီးများ ကြောက်ရတဲ့ အထဲမှာပါ ပါတယ် ။
လမ်းကြုံတုန်း ထဲထဲဝင်ဝင်သိတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို အတိုချုံးပြောရဦးမယ် ။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အထင်ကရ နေရာတစ်ခုမှာ Bored Pile စိုက်ပြီး မဆောက်ရသေးပဲ ပြသနာတက်နေတဲ့ မြေကွက်ကြီးတစ်ခု ယနေ့တိုင်ရှိပါတယ် ။ ဆောက်တဲ့ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီက ဦးပိုင်နဲ့ ဖက်စပ်ဆောက်တာပါ ။ ပြောရရင် သူတို့လည်း အတော်ပိုင်တယ်လို့ပြောရမယ် ၊ အရေးတော်ပုံအပြီးမှာ စစ်တပ်ကို လက်နက်တောင်ပွဲစားလုပ်ပေးဖူးပါသေးတယ် ။ ဒါပေသည့် တကယ်ဆောက်တော့ ဦးပိုင် ၊ စစ်တပ် ၊ ကြံ့ဖွတ်တွေကို ဒေါ်လာအမ်းရပါတော့တယ် ။ ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းကြော်မှာဆိုတော့ ဦးပိုင်နဲ့ဖက်စပ်စာချုပ်ကို အပေါင်ထားပြီး ၊ Sanction မပိတ်ခင် ပြည်ပက ဘဏ်တစ်ခုမှာ ငွေချေးပြီး ပြေးပါတော့တယ် ။ အဲ့သမှာ အစိမ်းဝတ်အစိုးရလည်း အကြီးအကျယ် နင်ပါတော့တယ် ။ သူတို့က ဥပဒေကို နားမလည်တော့ ညံ့ကြေးပေးလိုက်ရတာပေါ့…
တကယ်တမ်းတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆိုတာ မသေချာ မရေရာမှုတွေ အပြည့်နဲ့ပါ ။ မြောက်များစွာသော အဘတွေထဲက ဒီအဘနဲ့ပိုင်လို့ လုပ်ပေမည့် အဲ့အဘကားရင် ဂါထားတဲ့သူတွေလည်း ပိုက်ပိုက်ဆုံးပြီး မြောင်းထဲရောက်တာပဲ ။ အခုအစိုးရက အပူတပြင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို အသက်သွင်းပေမည့် ဟာကွက်တွေ အများကြီးပါ ။ ဥပမာ မြန်တျန့်ကရတဲ့ အမြတ်အစွန်းကို ဘယ်လို နိုင်ငံခြားကို ငွေဖြူအဖြစ် ပြန်ထုတ်ရမယ် ဆိုတာလိုပေါ့ ။ ကုမ္ပဏီကြီးတွေက အဲဒါကြောင့် ငွေပေးငွေယူကို ပြည်ပမှာပဲလုပ်ပါတယ် ။ ဒါပေမည့် ပြသနာတက်လို့ ဥပဒေကြောင်းအရ ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆို တရားဝင်မှုအတွက် မေးခွန်းထုတ်စရာပါ ။
ပြည်တွင်းခရိုနီတွေအတွက်လည်း အခုတလောမှာ လုပ်ကွက်မတွင်ဘူးလို့ အတော်ညည်းသံထွက်ပါတယ် ။ မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ့ဝိုင်းပက်ကြသတဲ့ ၊ အဝေမတည့်ရင် ပြိုင်ဘက်တွေက နေ့စားနဲ့ ဆန္ဒပြခိုင်းတဲ့ အမှုလေ ။
နောက်ဆုံးပေါ်လုပ်ကွက်ကတော့ ပြောင်းပြန်ရိုက်နည်း ။ ပြည်တွင်းခရိုနီတွေက ပြည်ပက ကုမ္ပဏီအသေးတွေကို အစုရှယ်ယာအများစုဝယ်လိုက်ပြီး တဘက်လှည့်နဲ့ ပြည်တွင်းက ပရောဂျက်တွေကို ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုပြီး နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက် ရိုက်တာပါ ။ ဒါတောင် အရင်လို MIC က ထင်တိုင်းမပေါက်တော့လို့ ဆူဆူညံညံ အသံတွေ ထွက်နေလေရဲ့……
အဟတ်… နောက်တခါ ဒါမျိုး Seminar သွားမယ်ဆို ဒေါ်လာ-၆၀ဝ စီသာပေး ၊ အောက်လမ်းနည်းတွေ သင်ပေးမယ်… လို့
ကျောက်စ်ပြောတဲ့ မြို့လယ်က မဆောက်ရသေးတာ အရင်စိန်ဂျွန်းဈေးနေရာလား.. မင်းဒင်ရဲ့ သက်ခိုင်ထဲမှာ ဖတ်ရတာ
အဲဒီ မျိုးဆက်ဆိုတဲ့လူ ရေးတာ အရင်ကတည်းက တော်တော် သဘောကျတယ်
ခုနောက်ပိုင်း သိပ်မရေး တော့ဘူးလားလို့
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒေါ်စုကို အခွင့် အရေး တော့ ပေးသင့်ပါတယ်
သူနောက်မှာ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်သူ သိပ်မရှိလို့ ဆိုပေမယ့်
သူတက်လာရင် အလိုလိုပေါ် ထွက်လာမှာ မြင်ယောင်သေး
ဒိုင်ရှိုလေး တွေ ခုချိန်မှာတော့ ပေါ်တင် ထွက်မပြ ရဲသူတွေ အပုံကြီး
အရင်က သူရေးတာ ၂ ဖက်ချွန်လိုမျိုးးပဲ။
ဒေါ်စု ကို အခွင့်အရေးပေးဖို့ ဆိုတာ ဒေါ်စု အတွက် မဟုတ်ပါဘူးးး
ကျော်တို့ နိုင်ငံ အတွက် ပါနော့ ဒေါ်လေးရယ်။
တစ်ခုပဲ သိချင်တယ်.. ကိုယ့်ထက် ဆိုးတဲ့ နိုင်ငံ ရှိသေးလားဟင်င်..
မြောက်ကိုရီးယားက စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတော့ ကိုယ့်ထက်များ ဆိုးသလား သိချင်သား…
ဆိုးရင်တော့ ဖြေစရာလေး ရမလားလို့..
ကောင်းလာသင့်သလောက် မကောင်းလာလို့ ပြောနေရတာပါ။
.က ျုပ်က အရင်အစ အလုပ်ရုံနဲ့အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှာ အင်စပက်တာလုပ်ခဲ့တာ
.ဥပဒေတွေက ခေတ်မှီပုံဩခ ျလောက်ပါရဲ့
.အဲ့လို ခေတ်မှီဥပဒေတွေနဲ့ က ျုပ်တို့ခမ ျာ သစ်သားသေနတ်နဲ့ စစ်တိုက်တမ်း ကစားခဲ့ကြတာ
.၈နှစ်အကြာမှာတော့ အလုပ်ကလည်းမအောင်မြင်၊ လူကလည်းငတ်..ဒါနဲ့ပဲထွက်ခဲ့ရတယ်
.ခုထိလည်း ဥပဒေခေတ်မမှီတဲ့ကြားထဲ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပါမရှိသေးတော့ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမယ်ဆို
.လူလည် လူနပ်တွေသာ ဝင်လာမှာပဲ…
လူလည်လူနပ်တွေကကျ သူတို့ကို သက်ဆိုးရှည်စေချင်မှာမို့ မကောင်းပြန်ဘူးးး
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ် ဆိုတာက သူတို့ လာတာနဲ့ သူတို့ စီးပွါးအမြင်၊ ပညာ အမြင်က အစ ကိုယ်တွေရရမှာကို။
ခုဟာက နိုင်ငံထဲက အကုန်ခွါသွားကြတာချည်းပဲ။
ရေကူး ပြီးတော့ မြကျွန်းသာ၊ ဦးရဲထွဋ်ပဲရှင်းရတော့မယ်
(Written by : မာန်သူရှိန်)
(ဓာတ်ပုံနှင့်သတင်း – အောင်ရဲကို၊ အောင်မျိုးသန့်)
ရေကူးအသံလွှင့်စက်ရုံ တင်ဒါကိစ္စကို မေ ၂ရ ရက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးပိုက်ထွေးက လာရှင်းတယ်။
ဦးပိုက်ထွေး ရှင်းလင်းတာကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလည်းဖြစ်၊ သမ္မတ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးရဲထွဋ်က သူ့ရဲ့ Facebook မှာ ဖော်ပြတယ်။ ဒီလိုဖော်ပြရုံတင်မကဘူး။ ဖော်ပြချက်အောက်မှာ ရှင်းလင်းချက် Comment တွေကိုလည်း ရေးတယ်။ ဒီအခါ နားလည်လိုက်တာက ရေကူးအသံလွှင့်တင်ဒါကိစ္စမှာ ဦးရဲထွဋ်နဲ့ ဦးပိုက်ထွေးက အဓိကတာဝန်ရှိသူ ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာပါပဲ။
အစောပိုင်းကတော့ ဒီတင်ဒါခေါ်ယူမှုမှာ ဘယ်သူတာဝန်ရှိသလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ဖို့ ခက်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ အဖြေပေါ်သွားပါပြီ။ ပြန်ကြားရေးနဲ့ ရွှေသံလွင်အတွက် ဦးရဲထွဋ်နဲ့ ဦးပိုက်ထွေးတို့ တာဝန်ယူလိုက်တယ်လို့ ယူဆလို့ ရသွားပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ရပါမယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတကာမှာ အဂတိလိုက်စားနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ မီဒီယာပေါ်မှာ ပါလာပြီဆိုရင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီမှာရော ဘာလုပ်မှာလဲ။ ဦးရဲထွဋ်လို မီဒီယာကိစ္စမှာ နိုင်ငံတကာနဲ့ အမြဲတန်းကိုင်ပေါက်နေတဲ့ သူအဖို့ ဒါကိုပိုပြီး နားလည်ပါလိမ့်မယ်။
ပြောရရင်တော့ အရင်ကလည်း ဦးရဲထွဋ်နဲ့ ကျွန်တော့်ကြားမှာ အမေးအဖြေ စာအသွားအလာရှိဖူးပြီး ဦးရဲထွဋ်ကိုလည်း နာမည်တပ်ရေးဖူးတာတွေ ရှိပါတယ်။ အခုရေးတဲ့ ဆောင်းပါးကလည်း ဦးရဲထွဋ်ကိုပဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။
■ နိုင်ငံနစ်နာသွားတာကို ဝန်ခံလိုက်ပါ
ဝန်ကြီးဦးရဲထွဋ်ခင်ဗျား၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးပိုက်ထွေးလွှတ်တော်မှာ လာရှင်းတော့ အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ တင်ဒါစည်းမျဉ်းကြောင့် နိုင်ငံတော် ဘယ်လောက်နစ်နာသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို တိတိကျကျ ပြန်မရှင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဦးရဲထွဋ်တို့ တင်ဒါစည်းမျဉ်း ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ သိကျွမ်းတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက အခုလိုပြောပါတယ်။
ဝန်ကြီးဌာနပိုင်အဖြစ် ချန်ထားမယ့် မြေဧက ၃ဝ ပေါ်မှာ ကျပ်ဘီလျံ ၅ဝ မြှုပ်နှံပြီး ဝန်ကြီးတို့လိုချင်တဲ့ လူ ၅၀,၀၀ဝ ဆံ့က ဇာတ်ရုံကြီးတွေ မီဒီယာဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ပေးမယ်၊ ဝန်ကြီးတို့ ပြောသလို အသံလွှင့်ရုံဟောင်းကိုလည်း ရွှေ့ပေးပြီး ဆောက်ပေးမယ်၊ အဲ့ဒါအပြင် နိုင်ငံတော်အတွက် ကျပ်ဘီလျံ ၂၀ဝ လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူသောင်းချီနေလို့ရပြီး တိုက်ခန်း ထောင်ချီပါတဲ့ အိမ်ရာစီမံကိန်းတို့၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံတို့ ဆောက်ပေးဦးမယ်၊ အဲ့ဒီလို ဆောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ဆက်စပ်နေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ၊ မြောက်ဥက္ကလာ၊ မြောက်ဒဂုံနေရာတွေလည်း ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးသွားမယ်၊ ဒါတင်မကသေးဘူး ယာဉ်ကြောကြပ်တည်းမှု မဖြစ်အောင် ဂန္ခမာလမ်းဆုံကို ခုံးကျော် ထိုးပေးဦးမယ်၊ မြောက်ဒဂုံဘက်ကိုလည်း လိုအပ်ရင်သွားရလာရလွယ်အောင် တံတားတစ်စင်း ထိုးပေးဦးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်း ဝန်ကြီးကို ပြောလိုက်ပါတဲ့။
ဒါတောင် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကပဲ ပြောသေးတာနော်။ ဝန်ကြီးတို့ တင်ဒါစည်းမျဉ်းမှာ ကန့်သတ်ထားတဲ့ မီဒီယာအတွေ့အကြုံတို့ ရုပ်သံအတွေ့အကြုံရှိသူ အထူးဦးစားပေးတို့၊ ဆောက်လုပ်ရေးအတွေ့အကြုံ ရှိတို့ဆိုတဲ့ တစ်စုတစ်ဖွဲ့အတွက်ပဲ ရည်ရွယ်ပြီး ကန့်ထားတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေဖြုတ်ပြီး အပြိုင်အဆိုင်သာ ဝိုင်းပေးကြမယ်ဆိုရင် ဒီထက်မက နိုင်ငံတော်က ထပ်ရသွားမှာပါ။ ဝန်ကြီးတို့ ဖြစ်ချင်တာတွေလည်း ဖြစ်ရမယ်။
ကဲ ဝန်ကြီးရေ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ရသွားနိုင်မလဲ တွက်ကြည့်ပါဦး။ အနည်းဆုံး ဝန်ကြီးတို့လိုချင်တဲ့ အဆောက်အအုံတွေအပါအဝင် နိုင်ငံတော်က စုစုပေါင်း ကျပ်ဘီလျံ ၃၅ဝ ဖိုးလောက် ရသွားမယ်။
အခု ဝန်ကြီးတို့ တင်ဒါစည်းမျဉ်းအရဆိုရင် နိုင်ငံတော်က ကျပ် ဘီလျံ ၅ဝ ဝန်းကျင် ဖိုးလောက်ပဲရမယ်။
ဒီတော့ ဝန်ကြီးတို့ အခုရေးဆွဲခဲ့တဲ့ တင်ဒါစည်းမျဉ်းအရဆိုရင် နိုင်ငံတော်က ကျပ်ဘီလျံ ၃၀ဝ လောက် နစ်နာသွားတယ်ဆိုတာ ဝန်ကြီးတို့ ဝန်ခံလိုက်ပါ။ နိုင်ငံတော်နစ်နာစေမယ့် တင်ဒါစည်းမျဉ်းဆွဲခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူကိုလည်း ဝန်ကြီးတို့ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မီဒီယာတွေက တောင် ကြေညာပေးသင့်ပါတယ်။
ဒါကို လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် ကြိုက်တဲ့သူကို ခေါ်ရှင်းလိုက်ပါ။ အများထင်နေကြသလို ပေါင်းလုပ်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း ရှင်းလင်းပါ။ ဒီကိစ္စက ရှင်းရမယ့်ကိစ ္စဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာ မရှင်းရင် နောက်အစိုးရလက်ထက်မှာ ဥပဒေကြောင်းအရ စစ်ဆေးခံရလိမ့်မယ်။ စစ်ဆေးတဲ့အခါကျရင်တော့ ဦးရဲထွဋ်က အဓိက တာဝန်ခံရှင်းလင်းရလိမ့်မယ်။ ဥပဒေဘောင်ကျော်တာတွေ ရှိနေရင်လည်း တာဝန်ယူရပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံနစ်နာစေမယ့်ကိစ္စတွေ မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ ဦးရဲထွဋ်တို့ အာမခံနိုင်ရင် ဒီအစိုးရ လက်ထက် ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ တင်ဒါတွေ၊ အများပိုင်တွေကို ငှားရမ်းရောင်းချခဲ့တဲ့ စာချုပ်စာတမ်းတွေ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စာချုပ် စာတမ်းတွေ၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက ငှားရမ်းထားတဲ့ စာချုပ်စာတမ်းတွေ၊ လယ်ဆည်ဝန်ကြီးဌာနက ငှားရမ်းထားတဲ့ စာချုပ် စာတမ်းတွေ၊ ဝန်ကြီးဌာန ၁ဝ ခုလောက်က ငှားရမ်းရောင်းချထားတဲ့ စာချုပ်စာတမ်းတွေ အကုန်လုံးကို အများပြည်သူသိအောင် ထုတ်ပြပါ။
■ ဦးရဲထွဋ် အာမခံနိုင်လား
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးပိုက်ထွေးက တင်ဒါစည်းမျဉ်းတွေထဲမှာပါတဲ့ စည်းကမ်းချက် အမှတ် ၁၃၊ ၁၄ ကိစ္စကို လွှတ်တော်မှာ အကျယ်တဝင့် ရှင်းခဲ့ပါတယ်။
စည်းကမ်းချက် အမှတ် ၁၃ မှာ “စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းရှိ အိမ်ရာများ၊ ဆိုင်ခန်းများ၊ ရုံးခန်းများနှင့် မြေများအား အခြားသူတစ်ဦးဦးကို ရောင်းချခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း မပြုရ” လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအချက်ကြောင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူဟာ အဲဒီမြေပေါ်မှာပဲ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ ဝင်ငွေကိုသာလျှင် အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နောက်ပြီး စည်းကမ်းချက် အမှတ် ၁၄ မှာ “စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံနှင့် လုပ်ငန်းအားလုံးသည် မီဒီယာနှင့် ပတ်သက်ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများသာ ဖြစ်ရမည်”လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူ ဆောင်ရွက်ရမယ့် အဆောက်အအုံများဟာ အခြားအိမ်ရာစီမံကိန်းများလို ခွဲဝေရောင်းချလို့ရမယ့် အဆောက်အအုံများ မဟုတ်ဘူးလို့ ဦးပိုက်ထွေး က ပြောပါတယ်။
ဦးပိုက်ထွေးက လွှတ်တော်မှာ အကျယ်တဝင့် အဓိကထားပြီး ရှင်းသွားတာက တင်ဒါစည်းကမ်းချက် အမှတ်စဉ် ၁၃၊ ၁၄ နှစ်ခုတည်းပါပဲ။ လုပ်ငန်းလုပ်ခွင့် ရရှိသူဟာ အဲဒီစည်းကမ်းနှစ်ချက်အတိုင်း လုပ်ရမှာပဲလို့ ဆိုလိုချင်ပုံရပါတယ်။ ပြီးတော့ ရွှေသံလွင် တင်ဒါပုံစံမဝယ်ရသေးတဲ့ အကြောင်းကိုပဲ ကာကွယ်ပြောသွားတယ်။ တင်ဒါဖောင်ပိတ်ရက် မရောက်သေးပဲ ဒီလိုပြောတဲ့အတွက် ရွှေသံလွင်ဘက်က ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ ယူဆစရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဲ့ ရွှေသံလွင်အကြား ဆက်စပ်မှုတွေဟာ ဒီအချက်မှာတင် ပေါ်လွင်သလို ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ရွှေသံလွင်ကို ကာကွယ်မယ်ဆိုရင် ဒါတွေကိုလည်း ချပြနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ Sky Net ကို စာချုပ်ချုပ်တုန်းက အခွန် ၃ နှစ် ကင်းလွတ်ခွင့် ဘာလို့ပေးခဲ့လဲ၊ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတယ်ထား လုံးဝကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလို့မရတဲ့ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ရော သုံးနှစ်အတွင်း ဘယ်လောက်ဆောင်ထားသလဲ၊ ဆောင်ရောဆောင်ထားလား။ Sky Net မဏ္ဍပ်ကနေ စီးကရက်တွေ ကြဲချတာကို ရုပ်သံမှာပါ ဖော်ပြတုန်းက ဘာလို့အရေးမယူခဲ့သလဲ ဖြေကြည့်ပေးပါဦး။
ရွှေသံလွင် ဟာယမကာစက်ရုံ၊ စီးကရက် စက်ရုံလုပ်ငန်းတွေပါ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရတယ်၊ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ခြေက မြေဧက ရာနဲ့ချီပြီးရတယ်၊ စစ်တောင်း စက္ကူစက်ရုံကို စက်မှုဇုန်လုပ်ဖို့ ရတယ်၊ လမ်းတံတားလုပ်ငန်းတွေရတယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရွာငံမှာ မြေဧက ၁၃၀ဝ ကျော် သိမ်းခွင့်ရတယ်၊ နိုင်ငံပိုင်မြေတွေလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားတယ်၊ ဒီလောက်လုပ်ငန်း ပမာဏကြီးကြီးမားမားတွေရထားတဲ့ ရွှေသံလွင်အနေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ ငွေပမာဏအားလုံးဟာ ရလမ်းပြနိုင်တဲ့ငွေတွေ၊ အခွန်ဆောင်ထားပြီးသား ငွေဖြူတွေနဲ့ ကိုက်ညီရဲ့လားဆိုတာလည်း အရင်ချပြနိုင်မလား။ သိရသလောက်တော့ အခုနောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်တဲ့ ထိပ်တန်းအခွန်ထမ်း ၁၀၀ဝ စာရင်းမှာပဲ ပါလာပြီး အရင်နှစ်တွေက ထိပ်တန်းစာရင်းမှာ မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ ပါတယ်ဆိုတာတောင် ဆက်စပ်ပတ်သက် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီ ၂ဝ ကျော်လောက်ထဲ က နှစ်ခုသုံးခုပဲ ပါတာပါ။
ရွှေသံလွင်နဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း အခု အစိုးရလက်ထက် မဟုတ်ရင်တောင် နောင်အစိုးရလက်ထက်မှာပါ ရှင်းလင်းရမယ့်ကိစ္စတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ရော ဦးရဲထွဋ်တို့ အာမခံနိုင်လား။
လွှတ်တော်မှာ ဦးပိုက်ထွေး ရှင်းခဲ့တာကို အခြေခံပြီး ပြန်မေးရရင် တင်ဒါအောင်ပြီးလို့ စာချုပ် ချုပ်ပြီးတဲ့အခါ အဲဒီစည်းကမ်းချက်အတိုင်း တကယ်လုပ်၊ မလုပ်ဆိုတာကို ဦးရဲထွဋ် အာမခံနိုင်မလား။ မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့၊ မီဒီယာလုပ်ငန်း သီးသန့်အတွက်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး အခြားစီးပွားဖြစ် လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျိန်းသေပြောရဲသလား။
ဒါ့အတွက် တခြားမကြည့်ပါနဲ့။ ဦးရဲထွဋ်အတွက် အကောင်းဆုံး နမူနာတစ်ခု ပေးလိုက်ပါမယ်။ အဲတာကတော့ ဦးရဲထွဋ်တို့ အစိုးရသစ် လက်ထက်မှာပဲ စာချုပ် ပြန်ပြင်ချုပ်ပြီး စာချုပ်စည်းကမ်းတွေ မလိုက်နာဘဲ အများပြည်သူပိုင်နေရာကို စီးပွားဖြစ် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြကျွန်းသာ စာချုပ်ကိုသာ ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ထပ်ထုတ်ပြပါမယ်။ ဒါကိုလည်း ဦးရဲထွဋ်ပဲ ရှင်းရဦးမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဦးရဲထွဋ်က သမ္မတရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်ပြီး အစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေကိုယ်စား မကြာမကြာဖြေနေတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။
၁၉၉ဝ ခုနှစ် ဝန်းကျင်လောက်က မြကျွန်းသာကို အပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်စပြီး အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ လုံးဝမကိုက်တော့လို့ ပြန်အပ်၊ အဲ့ဒီကနေ တပ်မတော်လက်ထဲရောက်တယ်။
တပ်မတော်ကနေမှ စည်ပင်ကို ပြန်လွှဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ၂၀၁ဝ ပြည့်နှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ မြကျွန်းသာကို အများပြည်သူ အပန်းဖြေနားနေရာ နေရာအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ဖို့ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကို လွှဲခဲ့တာပါ။ အရင်အစိုးရလက်ထက် ဦးအောင်သိန်းလင်း မြို့တော်ဝန်အဖြစ် တာဝန်ယူတဲ့အချိန်က ပုဂ္ဂလိကကို လွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီတုန်းကတော့ အများပြည်သူ အပန်းဖြေ၊ အနားယူမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေပဲလုပ်ရမယ်၊ နှစ်ပေါင်း ၃ဝ အထိ (၂၀+၅+၅) အထိပဲ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးမယ် ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေ ကို ငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ သိရတယ်။ အရင်အစိုးရလက်ထက်က ဘာပဲငှားငှား နှစ် ၃ဝ မူနဲ့ပဲ ငှားလေ့ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက်လည်း ရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေက ရေပေါ်ဂေါက်ကွင်း၊ ချားရဟတ်တွေလို အများပြည်သူအပန်းဖြေနိုင်မယ့် လုပ်ငန်းတွေ၊ အများပြည်သူ နားနေစားသောက်နိုင်မယ့် ဆိုင်တစ်ချို့ကိုပဲ ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အရင်အစိုးရလက်ထက်က ချုပ်ခဲ့တဲ့ စာချုပ်ကို ဦးရဲထွဋ်တို့ အခုအစိုးရလက်ထက်ရောက်တော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှာ ပြန်ပြင်ချုပ်လိုက်ကြပါတယ်။
အရင်အစိုးရလက်ထက်က နှစ် ၃ဝ အထိပဲ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားတာကို အခု အစိုးရလက်ထက်ရောက်တော့ နှစ် ၆ဝ အထိ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးပစ်လိုက်တယ်။ နှစ် ၆ဝ ဆိုတာ တစ်သက်လုံး လုပ်စားဖို့ ပေးလိုက်တာနဲ့ သိပ်မခြားနားဘူး၊ တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် အပြတ်ရောင်းစားလိုက်သလိုပါပဲ။
အဆိုးဆုံးက အများပြည်သူ အပန်းဖြေ၊ အနားယူမှုနဲ့ လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့ ရှော့ပင်းစင်တာလို စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံတွေကိုပါ တရားဝင်တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်တွေကိုပါ တရားဝင်စာချုပ်ထဲ ထည့်ချုပ်ပြီး ခွင့်ပြုပေးလိုက်ကြတာပါ။
အများပြည်သူပိုင်၊ အများပြည်သူ အပန်းဖြေတဲ့နေရာကို ဒီလိုစာချုပ်ပြန်ပြင်ချုပ်ပြီး ပေးတဲ့နေရာမှာလည်း အများပြည်သူကို လုံးဝချပြခြင်းမရှိဘဲ ပြန်ပြင်ချုပ်ပစ် လိုက်ကြတာပါ။
အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပဲ စာချုပ်ပြန်ပြင်ချုပ်ပစ်လိုက်ကြတဲ့အပြင် အခု မြကျွန်းသာထဲမှာ စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံတွေ ဆောက်တော့လည်း စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်တွေကို ဘယ်လောက်အထိချိုးဖောက်ပြီး လုပ်နေတယ်၊ ငှားရမ်းခအပေါ်မှာလည်း နိုင်ငံတော်ဘယ်လောက်အထိ နစ်နာခဲ့တယ်၊ တယ်ဆိုတာကို Eleven Media Group ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ Facebook မှာ တင်ထားတဲ့ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းတွေကိုကြည့်ရင်လည်း အားလုံးသိနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီနစ်နာမှုတွေထဲမှာ အဆိုးဆုံးက ငှားရမ်းခကိုကျတော့ “အများပြည်သူအတွက်” ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပြီး မတန်တဆလျော့ပေးထားတယ်၊ တကယ်လုပ်တော့ စီးပွားဖြစ်လုပ်စားကြတဲ့အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါ အများပြည်သူအတွက်ရော၊ နိုင်ငံတော်အတွက်ပါ နစ်နာမှုတွေ ပေါ်လာတယ်။
■ မြကျွန်းသာမှာ ဘာဖြစ်နေပြီလဲ
လက်ရှိ မြကျွန်းသာထဲကိုသာ ဝင်ကြည့်လိုက်ရင် မြကျွန်းသာဟာ အများပြည်သူ အနားယူအပန်းဖြေမှုနဲ့ မဆိုင်တဲ့ ရှော့ပင်းစင်တာတွေ အပြိုင်အဆိုင်တည်ဆောက်မှုဒဏ်ကို ခံနေရတာ တွေ့ကြရမှာပါ။
ဝင်လိုက်တာနဲ့ အဝင်အဝက အရင်ရေလွှာလျှောစီးနေရာကစပြီး တစ်ခြမ်းလုံးမှာ အပင်အချို့ကို ခုတ်၊ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေကို အခိုင်အမာချ၊ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံတွေ ဆောက်၊ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ၁၈ ပေ၊ ပေ ၂ဝ လောက်အထိ နက်မယ် လို့မှန်းဆရတဲ့ မြောင်းကျယ်ကြီးတွေ နှိုက်တူးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်မြေလိုသဘောထား လုပ်နေလိုက်ကြတာ အပြိုင်အဆိုင်ပါပဲ။
ဖောင်ဒေးရှင်းချတယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာလဲ တစ်ကယ့်ကို အခိုင်အခံ့ အောက်ကိုနှိုက်တူးပြီး အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံဆောက်ဖို့ ဖောင်ဒေးရှင်းကို ချထားကြတာ။ သုံးထပ်ခွဲမြင့်တဲ့ အဆောက်အအုံတစ်လုံးဆို ပြီးတောင်ပြီးတော့မှာပါ။
မြောင်းကျယ်ကြီးလို့ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အခုတူးထားတဲ့ မြောင်းထဲမှာ ဘက်ဟိုးတစ်စီးဆင်းပြီး မြေတူးနေတာ လမ်းပေါ်ကကြည့်ရင် ဘက်ဟိုးခေါင်မိုးတောင် မမြင်ရပါဘူး။ ကျယ်လည်းကျယ်ပါတယ်။ တစ်ချို့နေရာမှာ ၁၈ ပေ၊ ပေ ၂ဝ လောက်အထိ အောက်ကိုထပ်နှိုက် တူးနေကြပါသေးတယ်။
မြကျွန်းသာရှေ့ဖက်၊ လက်ရှိဆောက်နေတဲ့ နေရာနဲ့ ကပ်လျက်မှာရှိတဲ့ အများပြည်သူ ကားရပ်နားတဲ့နေရာ၊ နံနက်စောစော အများပြည်သူ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့နေရာကလည်း အခုဆို ဆောက်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ အုတ်၊ သံချောင်း၊ သစ် စတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း ပုံတဲ့နေရာ၊ သံချည်သံကွေး လုပ်နေတဲ့နေရာ၊ လက်သမားလုပ်တဲ့ နေရာအဖြစ် ကုမ္ပဏီက ကိုယ်ပိုင်တဲ့မြေလို အသုံးချပြီး လုပ်ကိုင်ခြင်း ခံနေရတယ်။
ထပ်ပြီး မြင်လို့မကောင်းဆုံး အရာကတော့ အင်းယားကန်စပ်ထဲအထိဆင်း၊ အင်းယားကန်ရေပြင်ထဲ အုတ်တံတိုင်းဆင်းခတ်၊ အုတ်တံခတ်ထားတဲ့ရေပြင်ကို မြေပြန်ဖို့ပြီး မြေနေရာချဲ့ထွင် တည်ဆောက်နေမှုပါပဲ။ တိတိကျကျ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အင်းယားကန်ရေပြင်ပေါ်ကို ခိုးချဲ့ထားတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
မြကျွန်းသာဟာ အများပြည်သူ အပန်းဖြေနားနေရာဖြစ်လို့ အများပြည်သူ နားနေဖို့အတွက်ဆိုပြီး ဒါတွေကို ဆောက်နေကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အများပြည်သူ အပန်းဖြေမှုနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ရှော့ပင်းစင်တာတွေပါတဲ့ စီးပွားဖြစ် အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံတွေ ဆောက်လုပ်နေကြတာဖြစ်ြ ပီးလုပ်ငန်းရှင်သုံးဦးက တည်ဆောက်နေကြတာပါ။
ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်းဘက် မြကျွန်းသာ မျက်နှာစာထိပ်မှာ တည်ဆောက်နေတာက Mandalay Golden Wing ကုမ္ပဏီပါ။ Inya Palace ကုမ္ပဏီအမည်နဲ့ တည်ဆောက်နေပါတယ်၊ သူ့ရဲ့ နောက်ဘက်တွေမှာ တည်ဆောက်နေတာကတော့ Magic Land ကုမ္ပဏီနဲ့ တခြားလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးလို့ သိရပါတယ်။
အင်းယားကန်စပ် ရေပြင်ထဲအထိဆင်းပြီး ခြံခတ်တာကတော့ အဲ့ဒီသုံးဦးစလုံးပါပဲ။ ဒါက လက်ရှိမြကျွန်းသာရဲ့ အခြေအနေမှန်တွေပါ။
ချုပ်လိုက်ရင် အများပြည်သူ အပန်းဖြေနားနေရာ၊ အများပြည်သူပိုင်နေရာမှာ မဆောက်သင့်တဲ့ အထပ်မြင့်တွေ ဆောက်၊ အပန်းဖြေမှုနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ရှော့ပင်းစင်တာပါတဲ့ စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းတွေအဖြစ် မြကျွန်းသာကိုလည်း ပြောင်းလဲပစ်နေကြပြီလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
■ အကြီးမားဆုံး စာချုပ် ချိုးဖောက်မှုများ
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ဧပြီလ ၁ဝ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်ပင်သာယာရေး ကော်မတီနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေ မြကျွန်းသာ အပန်းဖြေဥယျာဉ်အတွင်းက မြေငှားရမ်းမှုအတွက် အချက် ၂၄ ချက်ပါ စာချုပ်ကို ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုကြပါတယ်။
၂၄ ချက်ထဲကမှ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းတဲ့အထိ အရေးယူလို့ရတဲ့ စည်းကမ်းချက် ချိုးဖောက်မှုကြီး အချို့ကိုပဲ ထုတ်နှုတ်ပြချင်ပါတယ်။
စာချုပ်ရဲ့ စည်းကမ်းချက်အမှတ် ရ အငှားချထားခြင်း ခံရသူ၏ တာဝန်ဆိုတဲ့ အချက်ရဲ့ အပိုဒ်(ဒ) မှာ ‘ရေပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ ရေပြင်ကိုမြေဖို့၍ဖြစ်စေ အသုံးချခြင်း မပြုရ၊ မြေဧရိယာ ကျယ်ဝန်းလာအောင် မပြုလုပ်ရ’ ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
အခု လက်ရှိ ဆောက်နေတဲ့ အဆောက်အအုံ သုံးခုစလုံးဟာ အင်းယားကန်ရေထဲအထိဆင်း၊ အုတ်တံတိုင်းခတ်မြေဖို့ပြီး မြေနေရာချဲ့ထွင်ထားတဲ့အတွက် စည်းကမ်းချက်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်ထားတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းမရပါဘူး။
ဒါ့အပြင် အဲ့ဒီစည်းကမ်းချက် အမှတ် (၇)ရဲ့ အပိုဒ် (က)မှာပဲ ‘ပထမအဆင့် လုပ်ငန်းတည်ဆောက်မှုများကို ၃၁-၃-၂၀၁၅ ရက်နေ့အပြီး ဆောင်ရွက်ပြီး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ပြုလုပ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ဧပြီလ ၁ဝ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်ပင်သာယာရေးကော်မတီနဲ့ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေ မြကျွန်းသာအပန်းဖြေဥယျာဉ် အတွင်းက မြေငှားရမ်းမှုအတွက် အချက် ၂၄ ချက်ပါ စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ရမည်။ မပြီးပါက လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရုပ်သိမ်းကာ စာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းမည်’ ဆိုပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။
အခု ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလ ၂ရ ရက်နေ့အထိ ရောက်နေပါပြီ။ ခုထိ မပြီးသေးတဲ့အတွက် ပြန်သိမ်းလို့ ရနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အခုထိ ဘယ်သူမှ အရေးမယူပါဘူး။
စည်းကမ်းချက် ၂ ဖြစ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတဲ့ အပိုဒ်မှာ ‘မြကျွန်းသာ အပန်းဖြေဥယျာဉ်အား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သဘာဝဥယျာဉ်ကြီး (Natural Park) အသွင်သဏ္ဍာန် ဖြစ်စေပြီး အများပြည်သူ အပန်းဖြေနိုင်သည့် Recreation Centre ဖြစ်ရန်၊ အများပြည်သူ လွတ်လပ်စွာ အနားယူနိုင်မည့် Relaxation Centre ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်’ ဆိုပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲ့လို ဖော်ပြထားပြီး အထဲကျတော့ အများပြည်သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အနားယူတာနဲ့လည်း မဆိုင် အပန်းဖြေတာနဲ့လည်း မပတ်သက်တဲ့ သုံးထပ်ခွဲရှိတဲ့ ရှော့ပင်းစင်တာတွေ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ခွင့်ကို စည်ပင်က ခွင့်ပြုထားတယ်၊ အဲ့ဒီမှာတင်စာချုပ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ခွင့်ပြုပေးတဲ့လုပ်ငန်းက တစ်ခြားစီဖြစ်နေတာ ရှင်းရှင်းကြီးပါပဲ။
ဆိုလိုရင်းကတော့ အများပြည်သူ အပန်းဖြေမြေနေရာကို စီးပွားဖြစ် ဈေးဆိုင်ခန်းတွေပါတဲ့ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံအဖြစ် လုပ်ကိုင်တဲ့အပြင် စည်းကမ်းတွေကိုပါ ချိုးဖောက်ပြီး လုပ်နေကြတာလို့ ပြောရမှာပါ။
■ နိုင်ငံတော် နစ်နာခဲ့မှု
အစိုးရသစ်လက်ထက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ထဲမှာချုပ်တဲ့ မြကျွန်းသာငှားရမ်းတဲ့ စာချုပ်ဟာ မြေငှားရမ်းခနဲ့ ငှားရမ်းခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ သက်တမ်းစည်းကမ်းချက်နဲ့တင် နိုင်ငံတော်က ကျပ်ဘီလျံပေါင်းများစွာ နစ်နာသွားရတဲ့ စာချုပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြေတစ်ဧကကို တစ်လ ကျပ် ၁ဝ သိန်းနဲ့ ငှားလိုက်တာဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၆ဝ အထိ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြကျွန်းသာနေရာဟာ လက်ရှိအနေအထားမှာ အတင်းထိုးရောင်းရင်တောင် တစ်စတုရန်းပေ အနည်းဆုံး ပျမ်းမျှ ကျပ် ၄ သိန်းတန်ဖိုး ရှိပါတယ်။ မြေ ၄၄ ဒသမ ၅၁၆ ဧက ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျပ်ဘီလျံ ၈၀ဝ နီးပါးအထိ တန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတောင် လုံးဝအနိမ့်ဆုံးနှုန်းနဲ့ တွက်ထားတဲ့ တန်ဖိုးပါ။
တစ်ဧက ကျပ် ၁ဝ သိန်းနဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆ဝ ငှားလိုက်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆ဝ စာ ငှားရမ်းခ စုစုပေါင်းက ကျပ် ၃၂ ဘီလျံကျော်ပဲ ရပါမယ်။ ငှားရမ်းခကို နှစ်တိုင်း ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတောင်းလို့ ရတယ်ထားဦး ကျပ်ဘီလျံ ၅ဝ ထက် နိုင်ငံတော်က ပိုရစရာ မရှိပါဘူး။ နှစ်ပေါင်း ၆ဝ လုပ်ကိုင်ခွင့် ဆိုတာကလည်း တစ်သက်လုံးလုပ်ကွာဆိုပြီး အပိုင်ပေးလိုက်တာနဲ့ ဘာမှမကွာပါဘူး။
ဒီတော့ ကျပ်ဘီလျံ အနည်းဆုံး ၈၀ဝ နီးပါး တန်ဖိုးရှိတဲ့ မြကျွန်းသာကို ကျပ်ဘီလျံ ၅ဝ လောက်နဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေလက်ထဲ ထိုးအပ်လိုက်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော် ဘယ်လောက်နစ်နာမလဲ တွက်လို့ရမှာပါ။
အများပြည်သူ အပန်းဖြေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေပဲ လုပ်ရမှာမို့ ဒီလောက် ငှားရမ်းခလောက်ပဲ ယူတယ်ဆိုရင်လည်း ရှော့ပင်းစင်တာလို စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းမျိုး ခွင့်ပြုဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုတည်ဆောက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်သုံးဦးက နိုင်ငံတော်ကိုကျတော့ အပန်းဖြေတဲ့ လုပ်ငန်းအတွက်လောက်ပဲ ငှားခပေးတယ်၊ လုပ်တော့ စီးပွားဖြစ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံပါ။
မြကျွန်းသာ မြေနေရာကို အခုလို စီးပွားဖြစ် လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီငှားရမ်းခနဲ့ မရပါဘူး။ တစ်ဧကကို အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း ၁၀ဝ နဲ့အထက် ငှားရမ်းခရမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြကျွန်းသာရှေ့မှာ လုပ်နေတဲ့ ဗီယက်နမ်က Hoang Anh Gia Lai ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ နေရာဟာ တစ်စတုရန်း မီတာကို အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၂ဝ ဝန်းကျင် ငှားရမ်းခပေးရတာကို ကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်တယ်။
အခုလို မြကျွန်းသာမှာ တစ်ဧကကို တစ်လ ငွေကျပ် ၁ဝ သိန်းနဲ့ ငှားရမ်းခွင့်ပေးတဲ့အပေါ်၊ စာချုပ် ပြန်ပြင်ချုပ်တဲ့အပေါ် သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီနဲ့ စည်ပင်အကြား အဂတိလိုက်စားမှု ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဆိုတာကို မဖြစ်မနေ စစ်ဆေးဖို့ လိုပါတယ်။
■ မြကျွန်းသာကို ဘယ်သူတွေ လုပ်နေတာလဲ
မြကျွန်းသာကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး အပိုင်းလိုက်ပေးတော့ Magic Land၊ MGS၊ GSB၊ Inya Palace၊ နေလပွင့်၊ ရူဂျီ၊ မက်စ်မြန်မာနဲ့ ဧဒင်ကုမ္ပဏီ ရှစ်ခုက အပိုင်းလိုက်ခွဲပြီး လုပ်ကိုင်ခွင့် ရခဲ့ကြပါတယ်။
ဧဒင်အုပ်စုကုမ္ပဏီရဲ့ တာဝန်ရှိသူကတော့ လက်ရှိ သူတို့လုပ်ကိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ အပိုင်းမှာ အများပြည်သူ အပန်းဖြေခြင်း၊ အနားယူခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းကလွဲပြီး အခုလို အများပြည်သူ အပန်းဖြေမှု၊ အနားယူမှုနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ရှော့ပင်းစင်တာလို စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းတွေ လုံးဝလုပ်ဖို့ မရှိဘူးလို့ တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောပါတယ်။ အကယ်၍ စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းတွေ လုပ်မိတယ်လို့ အများပြည်သူက ဆုံးဖြတ်ရင် သူတို့လုပ်ကိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ အပိုင်းကို ပြန်သိမ်းယူနိုင်တယ်လို့တောင် ထုတ်ဖော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုပဲ မက်စ်မြန်မာကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူကို မေးမြန်းတဲ့အခါမှာလဲ သူတို့အနေနဲ့ သူတို့လုပ်ကိုင်ခွင့်ရတဲ့ အပိုင်းမှာ ကလေးကစားကွင်း၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ပြခန်းလိုမျိုး အများပြည်သူ အပန်းဖြေခြင်း၊ အနားယူခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းပဲလုပ်ဖို့ စည်ပင်ကို တင်ပြမှာဖြစ်တယ်၊ အခုလို ရှော့ပင်းစင်တာတွေပါတဲ့ စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းမျိုး၊ အများပြည်သူ အပန်းဖြေမှုနဲ့ လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးတွေ မလုပ်ဘူးလို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မက်စ်မြန်မာကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ မြကျွန်းသာကို Green Zone အဖြစ် အများပြည်သူ အပန်းဖြေဖို့သက်သက် လုပ်ငန်းတွေပဲလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်တယ်၊ အများပြည်သူအမြင်မှာ မြင်ခဲ့ရင်၊ အများပြည်သူက ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ရင် အများပြည်သူ ဆန္ဒအတိုင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ချက်ခြင်းပြန်သိမ်းပေးမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
လက်ရှိ ရှော့ပင်းစင်တာပါတဲ့ အထပ်မြင့်တွေ တည်ဆောက်နေတာက Inya Palace ကုမ္ပဏီနဲ့ Magic Land ကုမ္ပဏီတို့ ရထားတဲ့အပိုင်းမှာ အများစု တည်ဆောက်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Inya Palace ကုမ္ပဏီက MGW ဦးဝင်းအောင်နဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်တဲ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။ MGW ကုမ္ပဏီဟာ စီမံကိန်းပေါင်းများစွာ တည်ဆောက်ခွင့်ရထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။
Diamond Inya Palace ကွန်ဒိုစီမံကိန်း၊ ပါရမီလမ်းပေါ်မှာ အထပ်မြင့် Diamond Parami Business Centre စီမံကိန်း၊ ဖိုးစိန်လမ်းပေါ်မှာ Garden Kandawgyi Tower အမည်ဖြင့် ၂ရ ထပ်အမြင့်ရှိ တာဝါတစ်ခုနှင့် ၂၁ ထပ်အမြင့်ရှိ တာဝါစီမံကိန်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ဆရာစံလမ်းပေါ်မှာ ၂၂ ထပ်အမြင့်ရှိသော Yankin Condominium စီမံကိန်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ငါးထပ်ကြီးဘုရားအနီးမှာ Bahan Servic Apartment အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း၊ မန္တလေးမှာ MGW Inter Continental Hotel အမည်ဖြင့် အထပ်မြင့်ဟိုတယ် စီမံကိန်း၊ ပုဂံဗူးဘုရားအနီးက မြေ ၁ဝ ဧကဝန်းကျင်ပေါ်မှာ အခန်း ၂၅ဝ ပါ MGW INDIGO Resort (Bagan) စီမံကိန်းတွေကို တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
MGW ဟာ ငွေကြေးပမာဏ မြောက်များစွာ မြှုပ်နှံရမယ့် စီမံကိန်းပေါင်းများစွာ လုပ်ခွင့်ရထားပေမယ့် ထိပ်တန်းအခွန်ဆောင်တဲ့ စာရင်းမှာတော့ အခုနောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အခွန်အများဆုံး ပေးဆောင်သူ ၁၀၀ဝ ဦးစာရင်းထဲမှာတောင် ပါမလာခဲ့ပါဘူး။
မြကျွန်းသာထဲမှာ စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံ နောက်ထပ် တည်ဆောက်နေတဲ့ ဒေါက်တာကျော်ဝင်းရဲ့ Magic Land ကုမ္ပဏီ ဆိုတာလည်း အခု နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ ထိပ်တန်းအခွန်ထမ်း ၁၀၀ဝ ဦး စာရင်းမှာတောင် ပါမလာတဲ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။ Magic Land ဒေါက်တာကျော်ဝင်းဆိုတာ Game City လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Magic Land ကုမ္ပဏီဟာ မြကျွန်းသာထဲမှာ မြေနေရာ ၁၃ ဧကကျော်နဲ့ အများဆုံးရထားတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး အကွက်အကွင်း အကောင်းဆုံးနေရာကို ရထားတဲ့ ကုမ္ပဏီပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေသာ ရယူခဲ့ကြတယ် နိုင်ငံအတွက် အခွန်ပြန်ပေးတဲ့ အပိုင်းမှာတော့ ထိပ်တန်းမှာ ရှိမနေခဲ့ပါဘူး။
■ စည်ပင်ဖြေရမယ့် မေးခွန်းများ
သာမန်မြေဖို့တာ မဟုတ်ပဲ ကန်ရေပြင်ပေါ်ကို ပေါ်ပေါ်တင်တင် မြေချဲ့ထွင်တာကို မသိတာလား၊ သိသိနဲ့ ခွင့်ပြုလိုက်သလား၊ ဘာကြောင့် အရေးမယူတာလဲ။ ဓာတ်ပုံအထောက်အထားတွေက ငြင်းလို့ မရပါဘူး။
နောက်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ အပြီးမသတ်ရင် လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းမယ်ဆိုပြီး အခုဘာကြောင့် ပြန်မသိမ်းပဲ ဆက်လုပ်ခွင့်ပြုထားသလဲ။
အရင်အစိုးရ လက်ထက်တုန်းက နှစ် ၃ဝ လောက်ပဲ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးတာကို အစိုးရသစ်လက်ထက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် စာချုပ်ပြန်ပြင်ချုပ်တဲ့အခါ ဘာကြောင့် နှစ် ၆ဝ အထိ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲ။ ဘယ်သူ့အမိန့်နဲ့ ပေးတာလဲ။
အများပြည်သူ အပန်းဖြေ၊ အနားယူမှုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်း လုပ်ရမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားပြီး ဘာကြောင့် အနားယူ အပန်းဖြေခြင်းနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ အခုလို အထပ်မြင့်ရှော့ပင်းစင်တာ တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးခဲ့ကြသလဲ။
ဒီလို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးတာ၊ ဒီလိုအချက်တွေနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုတာကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကို တင်ပြခဲ့သလား၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဆီ တင်ပြခဲ့သလား၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို တင်ပြခဲ့သလား၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ကို တင်ပြခဲ့သလား၊ နောက်ဆုံး နိုင်ငံတော်သမ္မတဆီ တင်ပြပြီးမှ ချုပ်တာလား။
နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ ချုပ်ခဲ့တာ၊ ပေးခဲ့တာ၊ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းရမယ့် စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုတွေရှိလျက်နဲ့ အခုလိုအရေးယူရမှာမယူပဲ မျက်ကွယ်ပြုထားတာဆိုရင်တော့ အဂတိလိုက်စားထားတဲ့ သဘောသက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ မြကျွန်းသာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး စည်ပင်က တစ်ခြားအများပြည်သူ အပန်းဖြေရမယ့်နေရာတွေ၊ အများပြည်သူပိုင်မြေတွေကို ဘယ်လိုပေးထားသလဲဆိုတာကိုပါ အားလုံးကိုပြန်ပြီးချ ပြရမှာပါ။ ချမပြဘူးဆိုရင်တော့ အဂတိတရားမကင်းလို့ နိုင်ငံတော်နစ်နာအောင်လုပ်ထားလို့လို့ အားလုံးကသတ်မှတ်ကြမှာပါ။ သမ္မတအနေနဲ့ရော အခုလို ပေးလိုက်ကမ်းလိုက် လုပ်နေတာတွေကို သိပါရဲ့လား။
■ အရင်အစိုးရနဲ့ အခုအစိုးရ ဘာကွာသွားလဲ
ဦးရဲထွဋ်ခင်ဗျာ။ အရင်အစိုးရလက်ထက်နဲ့ အခုအစိုးရလက်ထက်မှာ ဘာထူးသွားလဲဆိုတာ မြကျွန်းသာကိစ္စက သက်သေတစ်ခုပါပဲ။
အရင်အစိုးရလက်ထက်နဲ့ အခုအစိုးရလက်ထက် ဘာထူးသွားသလဲဆိုတာကတော့ အရင်အစိုးရလက်ထက်စာချုပ်မှုနဲ့ အခုအစိုးရလက်ထက်စာချုပ်ကပဲ သက်သေခံနေပါတယ်။
အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာချုပ်ဆိုခဲ့တုန်းက နှစ်၃ဝလောက်ပဲ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်၊ ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာ ပြန်ပြင်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါ နှစ် ၆ဝ အထိတိုးပေးလိုက်တယ်။
အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာချပေးတုန်းက ကုမ္ပဏီအားလုံးက အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ အပန်းဖြေ၊ အနားယူတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ပဲယူကြတယ်၊ အခုအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ အများပြည်သူအပန်းဖြေမှု အနားယူမှုနဲ့မဆိုင်တဲ့ ရှော့ပင်းစင်တာပါတဲ့ အဆောက်အအုံတွေ တည်ဆောက်ခွင့်ကို စည်ပင်ကိုယ်တိုင်က တရားဝင်ထည့်သွင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးပြီး လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။
ဒါကိုကြည့်တာနဲ့တင် အများပြည်သူပိုင်နေရာတွေကို ပုဂ္ဂလိကကိုချထားပေးတဲ့နေရာမှာ အရင်အစိုးရလက်ထက်က ထက်အခုအစိုးရလက်ထက်မှာ ခွင့်ပြုပေးတာတွေက ပိုတောင်ဆိုးသွားတယ်လို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေတယ်။
■ သမ္မတကြီးရဲ့ ကတိပြု မိန့်ခွန်းတွေ ပြန်သတိရ
ရေကူးအသံလွှင့် စက်ရုံတင်ဒါကိစ္စ၊ မြကျွန်းသာကိစ္စတွေပေါ်လာတဲ့အခါ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အစိုးရအဖွဲ့စတင်ချိန်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြောခဲ့တဲ့ ကတိပြုမိန့်ခွန်းတွေကို ပြန်သတိရပါတယ်။
အခုပေါ်ပေါက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေက သမ္မတကြီးမိန့်ခွန်းမှာပါတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ကွဲပြီး ဘယ်လောက်တောင်ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာ ဦးရဲထွဋ်ကပဲ ဖြေကြားပေးပါ။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးမိန့်ခွန်းမှာ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာ အခွင့်ထူးခံတွေ လက်ဝါးကြီးအုပ်ခြယ်လှယ်တာမျိုးမဖြစ်အောင် လုပ်သွားမယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ် ၃ဝ ရက်မှာပြုလုပ်တဲ့ ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပထမအကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြောခဲ့တာပါ။
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ အစိုးရက အတိုင်းအတာတစ်ရပ်အထိ ထိန်းသိမ်းပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မျိုးကို ရည်မှန်းပါတယ်။ ဝင်ထိန်းပေးမယ်ဆိုတာလည်း ဈေးကွက်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကို ထိန်းချုပ်လိုတဲ့သဘောမျိုးမမဟုတ်ဘဲ အရင်းရှင်၊ ဓနရှင်ကြီးများ၊ အခွင့်ထူးခံများက လက်ဝါးကြီးအုပ်ခြယ်လှယ်တာမျိုးမဖြစ်အောင် ထိန်းကျောင်းတည့်မတ်ပေးတာမျိုးကိုသာ ရည်ရွယ်ပါတယ်” လို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မေ ၃၁ ရက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ခမ်းမမှာပြုလုပ်တဲ့ မိန့်ခွန်းနာခံခြင်းနဲ့ ကတိသစ္စာပြုခြင်း အခမ်းအနားမှာလည်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်က သန့်ရှင်းတဲ့အစိုးရ (Clean Government) ဖြစ်ဖို့ အဂတိတရားကင်းရှင်းဖို့လိုကြောင်း၊ မိမိအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတွေဖြစ်လို့ အခွင့်အရေးပိုပေးတာမျိုးတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဖြစ်လို့ အခွင့်အလမ်းပိုမိုဖန်တီးပေးတာမျိုးတွေ မလုပ်မိဖို့ အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
“မိမိတို့အစိုးရဟာ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့ (Good Governance) အစိုးရကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ရပါမယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ (Clean Government) အစိုးရဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အစိုးရကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ဖို့အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ အုပ်ချုပ်မှုကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ ပြည်သူတွေအပေါ် စေတနာထားရပါမယ်။ ပြည်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကို အကာအကွယ်ပေးရပါမယ်။ ပြည်သူကို အလုပ်အကျွေးပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ (Clean Government) ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ အဂတိတရားကင်းရှင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူခြင်းဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေခြင်းကြောင့် မိမိကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ မိမိတာဝန်ယူရတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလည်းကောင်း ကင်းကင်းရှင်းရှင်းရှိအောင် ထိန်းကျောင်းကြပ်မတ်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ကအပ်နှင်းထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တလွဲအသုံးချပြီး မိမိအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတွေဖြစ်လို့ အခွင့်အရေးပိုပေးတာတွေ၊ မိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဖြစ်လို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုပြီးဖန်တီးပေးတာတွေမလုပ်မိဖို့ အထူးအရေးကြီးပါတယ်။
ဒါတွေကိုရှောင်ကြဉ်နိုင်မှသန့်ရှင်းတဲ့ (Clean Government) အဖြစ် မှတ်ကျောက်တင်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်” လို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတကြီးက ဒီလိုပြောခဲ့ပေမယ့် ဦးရဲထွဋ်တို့ အစိုးရသက်တမ်း လေးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံပေါင်းနှစ်ရာကျော်ရဲ့ နှစ်ပေါင်းရာချီတဲ့သက်တမ်းအတွင်းမှာ ဘယ်အစိုးရကမှ ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာလုပ်ငန်းတစ်ခုကို မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာထဲကနေ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ဝ အနစ်နာခံပြီး ကူညီခဲ့ဖူးတာရှိသလဲ။
အခုမြကျွန်းသာကိစ္စမှာလည်း ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာဆုံးရှုံးမှုဟာ နှစ် ၆ဝ မှာ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ဝ တောင်မကပါဘူး။ ခရိုနီစီးပွားရေးစနစ်တွေ ရှင်သန်နေတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှုတွေ ပိုများလာတယ်။ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတွေ၊ စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကနေ လူထုက စီးပွားရေးကြပ်တည်းလာတယ်။
စီးပွားရေးဆိုးဝါးမှုကြောင့် မကျေမနပ်ဖြစ်မှုတွေ၊ အဲဒီကနေ နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်မှုကတစ်ဆင့် လာဘ်စား၊ စီးပွားဖြစ်သူ၊ အကျင့်ပျက်အရာရှိတွေ၊ ခရိုနီတွေက သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုပျောက်ချင်လို့ ငါးတကာယိုတဲ့ချီး၊ နောက်ဆုံး တပ်မတော်အပေါ်ပုံချလိုက်မှာကို လူထုကစိုးရိမ်နေပါတယ် ဦးရဲထွဋ်ခင်ဗျာ။
ဒါကြောင့် ရေကူးအသံလွှင့်စက်ရုံကိစ္စနဲ့ မြကျွန်းသာကိစ္စတွေဟာ ရပ်ဆိုင်းရုံတင်မကဘဲ နိုင်ငံတကာမှာလို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ဥပကြောင်းနဲ့ပါ အရေးယူပေးပါလို့ လူသန်းပေါင်း ၅ဝ ကျော်ကို သက်သေထားလို့ တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
(Green Zone ၊ Relaxation Zone အဖြစ် ပုဂ္ဂလိကများအား ၂၀+၅+၅ (နှစ် ၃၀) အငှားချစာချုုပ်အား ယခုအစိုးရလက်ထက်၌ ၄၅+၅+၅+၅ (နှစ် ၆၀) စာချုပ် ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုကာ တစ်ဧက ၁ဝ သိန်း (ပြင်ပပေါက်ဈေး မတန်တဆ လျှောနည်းသောဈေး) ဖြင့် ငှားရမ်းထားသော မြကျွန်းသာဥယျာဉ်အား စီးပွားဖြစ်အဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်မှုကြောင့် ဝန်းကျင်အလှ ပျက်ပြားနေသည့် မြင်ကွင်းများ နှင့် မြကျွန်းသာ အပန်းဖြေဥယျာဉ်မြေနေရာ ငှားရမ်းခြင်း သဘောတူစာချုပ် )
JICA နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ပရောဂျက် တစ်ခုမှာပေါ့…
မြန်တျန့်ရဲ့ ထိပ်တန်း ခရိုနီကြီး ၅-ဦးထဲက တစ်ဦးကို တင်ဒါစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသတဲ့ ။ ခရိုနီကြီးလည်း ရောက်လာပြီး မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ သူလက်မှတ်ထိုးရမည့် စာချုပ်တွေကိုပြပါလို့ တောင်းဆိုပါသတဲ့ ။ တင်ဒါဘုတ်အဖွဲ့မှာပါတဲ့ ဂျပန်ပညာရှင်က ၊ စာချုပ်ချုပ်ဖို့မဟုတ်သေးကြောင်း … တင်ဒါစည်းမျဉ်းနဲ့ ညီမညီ verify လုပ်ဖို့သာ ဖြစ်ပါကြောင်းရှင်းပြတော့ … “ဒီနိုင်ငံမှာ သူလုပ်ချင်သမျှစီးပွါးရေးကို ဘယ်သူမှ တားမြစ်စီစစ်ပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်း” ခရိုနီကြီးက ဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောသတဲ့ ။ ဂျပန်ကလည်း အထာနပ်လေတော့ “အဲဒါဆို လူဂျီးမင်းတို့ အစိုးရနဲ့ လူဂျီးမင်းသာ ညှိကြပါ ၊ JICA ဘက်က နောက်ဆုတ်ပါတယ်” ဆိုပြီး ပြုံးပြုံးလေး ထထွက်သွားသတဲ့ ။ ကျန်ခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေးခန်းထဲက မြန်တျန့် ညွှန်ချုပ်တွေ ဒုဝန်ကြီးတွေ ကော်မတီဝင်တွေ မျက်နှာအကြီးအကျယ်ပျက် အာစေးထည့်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲတဲ့….
အဲဒါ ပုံပြင်မဟုတ်… မြန်တျန့်မှာ ဒါမျိုးတွေရှိတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း…
အဆုံးသတ်တော့ အဲသည့် ဖရီး ထောက်ပံ့ငွေပရောဂျက် ဂိန်းသွားတယ်… အနိစ္စ
ခရိုနီ များ သယံဇာတပြောင်
“ရဲရဲ the ဝန်ကြီး” ကတော့ မီရှဲယို နဲ့ ပုံကို ပီတိ ဖြစ်စွာ share ထား တာ တွေ့တယ်။
ဝေတော့ မဝေဖန် လိုပါဘူး။
သို့ပေမဲ့ တို့ မြန်မာ မင်းသမီး တွေ ထက် အပုံကြီး ကျက်သရေ ရှိတယ်။
. မြန်မာမင်းသမီး တွေ ကို ကြည့်ရတာ မိတ်ကပ် ထူလဗျစ် နဲ့ သဘာဝ မျက်နှာ ကို ပျောက်နေရော။
တကယ်တော့ မီရှဲယို ကို ၂၀၁၂ က ပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်ပြီး လေဆိပ် ကနေ ပြန်နှင်ထုတ်ခဲ့တာ။
အခုတော့ လဲ ခပ်ပြောင်ပြောင် ဘဲ ကိုယ်တွေ ဘာမှ မလုပ်ခဲ့သယောင် နဲ့ ဧည့်ဝတ်ကျေ နေပြန်ပါရော။
ရူးချင်ယောင် ဆောင်တတ်တာမှာလဲ နှစ်ယောက် မရှိသော အစိုးရမင်းများ နဲ့ .ကြိုက်သလို ပြင်နိုင် ဖျက်နိုင်တဲ့ ဥပဒေ တွေ မြင်နေရတာမို့
ဒီ အကြောင်းတွေ ကမ္ဘာသိတာ မဆန်းတော့။
အရောင်ရင့် တစ်ခုရဲ့ ကောမန့် မှာ ဖတ်လိုက်ရဖူးးးးး
ဒီကအကြောင်းကို အမှန်အတိုင်းသိပြီး အမှန်အတိုင်း ပြောတာမို့ ဒီကိုလာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကို ပေးရတာနဲ့တန်အောင် သတင်းအချက်အလက်တွေ ရလိုက်တာပဲလို့ ပြောရမယ်။
ချစ် မ ရေ,
သူတို့ လူတွေ မခံရအောင် အင်ဖိုတွေ အကုန်ပေးးတယ် လို့ ပဲ မှတ်ရတော့ မယ်..!
တနေ့ကလှုပ်တဲ့ စင်ကာပူမွတ်သမီးအသင်းပွဲမှာ ထင်ရဲ့…။ ဂုံပုပါဒယ် ယာဆွိမင်.. ဆလုံမာယေးကွမ်း
ခေါင်းးမြီးးလေးး ခြုံထားတာ ကျနော်ပေါ့